GTCက မှာတွေ့ကြမယ် – Grab Love Story
by phyu June 7, 2021
ကျနော်မိန်းမ အတန်းဝင်ခါနီး မသွားခင်တချည်ဆွဲပီးလိုးပေးလိုက်တယ်
ညကလည်း ညနက်ထိအောင်လိုးထားတာ ခုလည်း အတန်းဝင်ခါနီး လုပ်နေတာပဲ မြန်မြန်လုပ်ပီး ပီးလိုက်ပါတယ် မိန်းမနမ်မည်က ဒေါက်တာပပမင်း ဆရာဝန်မ မဟုတ်ဘူး PHD ဒေါက်တာပါ ITဌာနက သင်ကြားရေးဘက်က ဆရာမ တယောက်ပါ ကျနော်က ကွန်ပျူတာ မိတ္တူဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါ ကျနော်မိန်းမ ဒေါက်တာရထားတာဆိုပေမဲ့ အသက်က ၃၀ကျော် အသားကဖြူဖြူ ရင်ထွားထွား တင်ကားကား ကျောင်းသားနဲ့ဆရာတွေက မြင်ရင်သားရည်ကျလောက်စရာပေါ့ မိန်းမကလည်းရမက်ကြီးတယ် ဘယ်လောက်လိုးလိုး ပေးရှာပါတယ် ကျနော်ကတော့ စိတ်ဆာရင်အလင်းဆွဲဖြစ်တယ် တခါတလေတေ့ ညဦးပိုင်း လိုးတာနဲ့ ပီးရော ဘယ်လောက်တောင့်တောင့်စားပါများလာတော့ အီတာလည်းပါတာပေါ့ ဒီတော့အဆောင်ရှေ့ကဖြတ်သွားရင် ဆရာမအပျိုကြည့်မလား ကျောင်းသူလေးတွေကြည့်မလား ကိုယ့်အခန်းတွင်းမှာ မိတ္တူထောင်းထားတော့ လာကူးကြပါတယ် ဆရာမတွေလာတယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူလာကြတယ် ပျင်းရင်ဖုန်းပွတ်တယ် Fake acc နဲ့ချက်တယ် နမ်မည်ကို လှလှပေးတယ် ခုကျနော်လက်ရှိနမ်မည်က မောင်ဇော်ပါ fake accမှာဆိုတေဇာအောင်ပေါ့ တနေ့မှာ မြတ်စုလှိုင်ဆိုတဲ့အမျိုသမီးနဲ့ လိုင်းပေါ်ဆုံမိပါတယ် မိန်းမကိုတော့အပျော်တန်းချက်ထာပါလို့ပြောထားပါတယ် မြတ်စုလှိုင်က ဆေးကုန်မဏီကမန်နေဂျာပါ ဒီလိုနဲ့ ရင်းနှီးလာရင်းနဲ့ လိုင်းပေါ်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်
မြတ်စုလည်း ကို့ ကိုချစ်တယ် ဒါတွေဟာလိုင်းပေါ် ပြောဖြစ်ကြပါတယ် ပုံလေးတွေပြပြီး အပြန်လှန်ပို့ကြပါတယ် ကျနော်မိန်းမရှိတာမြတ်စု သိခဲ့တယ်
တနေ့မှာတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မိန်းမ နယ်ဘက်အိမ်ပြန်တယ် ကျနော်ကဆိုင်ကယ်လဲလို့ လက်နာတာကို လာမေးတာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ စကားပြောရင်းနဲ့ အခန်းထဲခေါ်လာတာပေါ့ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ မြတ်စုနှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ်
ပြွတ် နို့ ကို အင်ကျီပေါ်က ကိုင်လိုက်တယ် တင်းနေတာပဲ လက်ကအောက်ဆင်းပီး တင်တွေစုပ်ကိုင်လိုက်တယ် မြတ်စုကလည်း ကျနော်လီး ကို ပုဆိုးပေါ်ကနေ စုပ်ကိုင်တယ်
တကယ်တော့ ကျနော်လီးက ပုံမှန်ဆိုက်ပါ ဒါနဲ့ သူ့ကို ခုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ် ဒါနဲ့မြတ်စုနှုတ်ခမ်းကို မျှင်ပီးဆွဲစုပ်လိုက်တယ် သူလည်း မျက်တောင်ဆင်းကြသွားပီး သူအပေါ်အင်ကျီကြယ်သီး ဖြုတ်လိုက်လိုက်ပီး ဘယာစီယာကို လက်တဖက်နဲ့ ဂျိတ်ဖြုတ်လိုက်တယ် ဘယာချောင်သွားတော့ အပေါ်ပင့်တင်လိုက်တော့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနို့အုံကိုစုပ်နယ်လိုက်တယ် နို့အသီးလေးကို ချေပေးလိုက်တော့
ဒါနဲကျနော်လည်းလက်ကအောက်ကိုဆင်းပီး သူတင်နှစ်လုံးကိုစုပ်နယ်လိုက်တယ် တင်ကနေလက်ကိုရှေ့ဘက်ချမ်းဘက်သူအဖုတ်ကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ် သူလည်းတွန့်သွားပီး လက်ကိုလာကိုင်တယ်
ကို အဲဒီဘက်ဘာလို့ကိုင်တာလည်း ကြောက်တယ်
ကျနော်လည်း ဘယ်လက်က နို့ကိုင်ထားတယ် ညာလက်က အဖုတ်ပွတ်ထားတော့ ပါစပ်က နို့သီးလေးကို စို့လိုက်တယ်
ပလွတ် ပလပ် ပလပ်
အားးးးးရှီးးးးးးးးယားတယ် နောက်တဖက်ကိုပြာင်းစို့လိုက်တယ် အဖုတ်ကအစေ့လေးကိုလည်းချေလိုက်တယ် အရည်တွေက အရမ်းစိုစွတ်နေတော့ သူပေါင်ကြားနေရာ ဝင်ယူလိုက်တယ် လီးကလည်းအရမ်းတင်းနေတော့ မြတ်စု အဖုတ်ကို တေ့ထားပီးသွင်းလိုက်တယ်
ဗြစ် ဗြစ် ဖွတ် ရှူးးးးးးး
အားးးးနာတယ် နာတယ်ကို ဖြေးဖြေး
သူ့အဖုတ်လေးက ကြတ်နေပေမဲ့ အရည်ထွက်နေတော့ စီးစီးလေးနဲ့ လိုးလို့အရမ်းကောင်းတာပဲ မြတ်စုက ဆေးကုန်မဏီက မန်နေဂျာမ ဆိုတော့ လိင်ကိစ္စကိုအန်အသင့်နားလည်တယ်
ကိုရယ် နာလို့ပါ ခနငြိမ်ပေးပါ မြတ်စုဟာကသေးသေးလေရယ်အရမ်းလုပ်ရင်ကွဲမှာပေါ့
အင်းပါ သူ့ဆရာမ အဖုတ်ကကော
လိုးပါများတော့ ငြီးငွေ့တယ် မြတ်စုရဲ့
တော်ပါ နားရှက်စရာတွေ ဘာမှန်းလည်း မသိဘူး
ကျနော်လည်း အရည်လိုက်လာတော့ နဲနဲချင်ဆီ စောင့်ချလိုက်တယ်
မြတ်စုလည်း ကောင်းလာပီး ဆောင့် ဆောင့်
အားးး ရှီးးးးးရှီးးးးးးထွက်တော့မယ် ကို
ကျနော်လည်း အချက်၂၀လောက်ဆောင့်ချပီးအရည်တွေသူ့အဖုတ်ထဲပန်းချလိုက်တယ် ခနနားပီးတော့အဝတ်စားပြန်ဝတ်ပြီးမြတ်စုလည်း ပြန်သွားတယ် ။
ကျမက ဒေါက်တာပပမင်းပါ ကျောင်းပိတ်ရက်နယ် ပြန်တော့ ကားက ညပိုင်းထွက်တာ နယ်ပြန်သူတွေများတော့ ရှိတဲ့ကားနဲ့စီးလိုက်ရတယ် လူကအပြည့်ပါပဲ ကားထွက်တော့ဘေးနားက အမျိုးသားတယောက်နဲ့ကျတယ် လူကြီးပိုင်းပါပဲ အသက်ကတော့ ကျမထက်၅နှစ်လောက်ကြီးမယ် အသားက ညိုညို လူပုံက တိုတိုတုတ်တုတ်ပုံနဲ့စကားပြောဖောရောနဲ့ လာရောပါတယ် ကျောင်းမှာတော့ကျမတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပါတယ် ကားပေါ်မှာ အသိမပါတော့ ကောင်းမွန်စွာနဲ့စကားလက်ဆုံပြောဖြစ်တယ်လေ အပျင်းလည်းပြေတာပေါ့ ကားမောင်းတာ တစ်နာရီလောက်ရှိတော့ မှေးခနဲအိပ်ပျော်မလို့ရှိတော့ ကျမရဲ့လက်ကိုတို့ခနဲထိခနဲ ခံစားရတယ် ဆက်ပီးအိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တော့ လက်ကိုစုပ်ကိုင်ထားတယ် နောက်တကယ် အိပ်ပျော်သွားတော့ သူ့ပခုန်းပေါ်ခေါင်းကျတာမသိလိုက်လိုက်ဘူး အိပ်လို့ဆပ်ခနဲနိုးတော့ ကျမကို ဖက်ထားတယ် ကာပေါ်မီးကပိတ်ထားတော့ ကျမနို့ကိုအသာလေးပွတ်နေတယ် ကျမလည်းဘာမှမပြောပဲညိမ်နေတော့ နို့ကိုခပ်တင်းတင်းနယ်လိုက်တယ် ကျမလည်းနာလာတော့
သူလည်း ကျမနိုးမှန်းသိတော့ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တော့တာပဲ
ပြွတ် ဆရာမ နိုးပီလား
ဒီလောက်ကိုင်ထားမှတော့ နိးပီပေါ့ နို့ကိုနယ်လို့ဝတော့ လက်က အောက်ဆင်းပီး တင်တွေကို ဖြစ်ညစ်တယ်
ချစ်တယ် ဆရာမ ရယ်
သူများကို ကိုင်ချင်သလိုကိုင်ပီးမှ လာပီးချစ်တယ်ပြောနေတယ်
ကိုင်တာကလည်း ဆရာမ အိပ်တယ်ထင်လို့ ခိုးကိုင်တာပါ အရမ်းကိုင်ချင်လို့ပါ
ဒါဆို ဆရာမ က ဘယ်မှာဆင်းမှာလည်း
ကျမနေတဲ့ မြို့ကိုပြောပြတော့ သူ့ကလမ်းဆင်းမှာ သူ့နောက်လိုက်ဖို့ပြောတယ် ကျမလည်းအဲလောက်တော့မလွယ်ဘူးလေ ငြင်းလိုက်တယ် သူကတွေ့ချင်တယ်ပြောတော့ မန်းလေးမှာနေတာပြောတော့ လာတွေ့ချင်တယ်ပြောတယ်လေ ယောက်ျားရှိတယ်ပြောပြထားတော့ မရှိတဲ့အချိန်တွေ့ချင်တယ် ဒါနဲ့သူ့ဖုန်းနံပါတ် ကိုယ်ဖုန်းနံပါတ်ခြင်းပေးပြီး အလဲအလှယ်လုပ်ကြတယ် အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ ကျမလက်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ရဲ့အချောင်းကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်
တကယ်ပဲကျမလည်း သူ့လီးကြီးဟာ် အိမ်ကယောက်ျားထက်ကြီးလို ဖြစ်ညစ်မိတယ်
အားးးဆရာမရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ အဲလိုနဲ့ သူဆင်းတဲ့နေရာရောက်တော့
ခုန သူဆင်းသွားတော့ ကျမရင်ထဲလည်း ဟာတာကြီးပေါ့ သူနမ်မည်က ကိုသံချောင်း တကယ်ပဲဘာမာသလည်း မမေးနဲ့ သံချောင်းထက်တောင် မာသေးတယ် လူကအသားညိုညို တုတ်တုတ်နဲ့ ပေါ့ ကျမနေတဲ့မြို့ရောက်တော့ ကိုသံချောင်းဆီက ဖုန်းလာတယ် လွမ်နေကြောင်း ကျမလည်းအလိုက်ထိုက်တော့ ပြောဖြစ်ပါတယ် မောင်နဲ့လည်းဖုန်ပြောဖြစ်တယ် ကျမပြန်လာမဲ့နေ့ခရီးထွက်စရာပေါ်လာလို့ တပါတလောက်ကြာမယ်ပြောထားတယ် ကျမလည်း ကျောင်းတာဝန်ရှိလို့ မန်လေးကို ပြန်လာခဲ့ရပါတယ် ကိုသံချောင်ကလည်း ကျမပြန်မဲ့နေ့သူလည်း မန်းလေးကို တက်မယ်ပြောပီး ဒိတ်လုပ်တယ်ပေါ့ ထိုင်ခုံနံပါတ်ပြောပြလို့ ကျမနားက ခုံနံပါတ်သူရအောင်ဖြတ်ထားလိုက်တယ် အဲဒီလိုနဲ့ မန်လေးကိုတက်လာပါတယ် လမ်းကနေတက်လာပီး ကိုသံချောင်းဟာ ကျမနားကပ်ထိုင်လိုက်ပါတယ် ကားကမောင်နေရင်းနဲ့ မှောင်ရိပ်သန်းလာတော့ လက်ခလေးကို ဆုပ်ကိုင်တယ် ကျမလည်း ရုန်ပါသေးတယ် သူကိုင်တာမြဲမြဲကိုင်ထားတော့ ရုန်းလို့မရဘူးပေါ့ နောက်တော့ ပခုန်းလေးဖက်ပီး သူ့ဘက်ရိုင်ကျလာတော့ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းစုပ်တော့တာပဲ ကျမလည်းပြန်စုပ်လိုက်တယ် တီရှပ်အပွဝတ်ထားတော့ လက်ကအောက်အပေါ်တက်လာပီး ဘယာအပေါ်ကနေ နို့ကိုနယ်တော့တာပဲ နောက်တော့ဘယာကပျော့တော့ ဘယာစီယာကို အပေါ်တင်ပီး နို့ကိုဒါရိုက်ကိုင်တော့တာပဲ နို့အသီးလေးကိုလည်း ချေပေးတော့ ကျမလည်းသူလက်ပေါ်ကနေ ကိုင်ပီး အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ငြီးမိပါတယ်
လက်ကအောက်ဆင်းသွားတော့ ပေါင်ကိုထဘီအပေါ်ကနေ ပွတ်တယ် သူလည်းဘေးဘီကြည့်ပီထဘီအထက်ဆင်စ ကိုဖြည်လိုက်ပီး အဖုတ်ထဲ လက်နှိုလိုက်တယ် ကျမလည်းသူ့နှိုက်လို့အဆင်ပြေအောင် ထိုင်ခုံရှေ့နဲနဲတိုးပီး ကော့ထိုင်လိုက်တော့ ကျမ စောက်ပတ်တခုလုံး ကိုင်တော့တာပဲ လက်က အစေ့လေးချေပီး လက်ညှိုးထိုးသွင်းလိုက်တယ် အရည်တွေကလည်းအရမ်းကို ထွက်ကျတော့တာပဲ ကောင်းကလည်းအရမ်းကောင်းနေတော့ သူ့လီးကြီးစုပ်ကိုင်လိုက်တယ် နောက်တော့အပေါ်အောက်လုပ်လိုက်တော့ လီးကတင်းမာလာတော့တာပဲ အဲလိုလုပ်နေရင်းနဲ့ သူရဲ့လက်နဲ့ ကျမစောက်ပတ်အရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် သိတ်မကြာခင်သူ့လီးက အရည်တွေထွက်ကျလာတယ် ၂ယောက်လုံးပီးသွားတော့ခြင်းထဲက တစ်ရှူးယူပီးသုတ်လိုက်တယ် ဒီလိုနဲကားပေါ်မှာ၂ယောက်လုံးအိပ်ပျော်သွားတယ် အိပ်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့ မန်းလေးကို အစောကြီးရောက်တယ် ကားငှားဖို့ကိုသံချောင်းက ငှားပေးပီးအတူစီးလာကြတယ် ကျောင်းဂိတ်ရှေ့ရောက်တော့ ကျမမြင်တာနဲ့ အစောင့်ကဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ် အခန်းရှေ့ကားရပ်ပီးအထုပ်ခြင်းထုပ် သော့က ကျမမှာလည်းအပို၁ချောင်းရှိတော့ဖွင့်ဝင်လိုက်တယ် ကျန်တဲ့အခန်းတွေလည်း အိပ်တော့ ကိုသံချောင်းပါတာမသိလိုက်ကြဘူး သူ့ကိုရှေ့က ဝင်ခိုင်းပီး အထဲရောက်မှ နောက်ကလိုက်ဝင်ပီး တခါးပိတ်လိုက်တယ် ကျမလည်းခုမှသက်ပြင်းချနိုင်တယ်
သူ့ကို ကော်ဖီနဲ့ ဧည့်ခံထားပီး ရေချိုးလိုက်တယ် ရေချိုးအဝတ်စားလည်းပီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်ပီး သူ့အနားလေးထိုင်လိုက်တယ်
ကိုသံချောင်းကလည်း ကျမကို ဖက်လိုက်ပီး နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်တယ်
ဆရာမ ရယ် ရေချိုးထားတော့ လတ်ဆတ်ပီး အရမ်းကောင်းတာပဲ နောက်တော့ကျမကို ပွေ့ချည်ပီး ကျမတို့လင်မယားအိပ်တဲ့ ခုတင်ပေါ်ခေါ်သွားတယ် ခုတင်ပေါ်ရောက်တော့အသာချပီး အင်ကျီဆွဲချွတ်တယ် ဘယာစီယာချွတ်ဖို့ ကျောအောက်ကို လက်နှိုက်တော့ ကျမလည်းကော့ပေးမိတယ် ဂျိတ်လည်းပြုတ်ရော ပေါ်လာတဲ့ကျမနို့ ကိုနယ်တယ် နောက်သူခေါင်းငုံ့ခါပီးနို့ကို စို့တယ် အရမ်းစို့တာပဲ
အားးးးးးးးဖြေးဖြေး နို့သီးလေးတောင်ကျင်သွားတာပဲ နို့လည်းမထွက်ပဲနဲ့ အရမ်းစို့တာပဲ
နောက်တော့ လက်က အောက်ဆင်းပီးကျမစောက်ပတ်ကို ပွတ်တော့တာပဲ လက်ထိပ်က အစေ့လေးကို ထိုးထိုးပီး ကလိနေတော့ အရည်တွေကလည်းအရမ်းထွက်နေတယ် အဖုတ်ကလည်း အရမ်းယားတက်လာတော့သူရဲ့လီးကို စုပ်ကိုင်လိုက်တယ် လီးက သံချောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမာတောင်နေတာပဲ
အကြီးကြီးပဲရှင်ရယ် တကယ်ပဲ ကျမလည်းသူ့လီးအပေါ်အောက်ဆွဲပီး လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူက ကျမပေါင်ကြား ဝင်ထိုင်ပီး စောက်ပတ်ကို သေချာကြည့်တယ်
ဆရာမ ဟာလေးက အရမ်းလှလို့
ဟာ လှပါဘူး အ အား
သူ ကျမစောက်ပတ်ကို ယက်တယ် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြားကို လျှာထိုးပီးယက်ထာ အရည်တွေထွက်လာရင်လည်းစုပ်ပစ်လိုက်တယ် အစေ့လေးကိုလည်း ဆဲစုပ်တယ်
ကို ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း အားးးးရှီးးးးး
သူလည်းပေါင်ကြားမှာနေရာယူပီး ကျမစောက်ပတ် ထဲတေ့ထားတယ် ကျမယောက်ျားမဟုတ်တဲ့လီးပထမဆုံးသွင်းတော့မယ်ဆိုတော့ ရင်လှပ်လှပ်နဲ့ စောင့်မျှော်မိတယ်
ဗြိ ဖွတ် ဘွတ် ရှူးးးးးးး
အားးးးးးးနာတယ် နာတယ် ဖြေးဖြေး
သူလည်း လီးတဝက်လောက်ထိသွင်းပီး ခနရပ်ထားပါတယ် အဖုတ်ထဲလည်းပြည့်ကြတ်နေတာပဲ လီးက တုတ်တယ်ကျမယောက်ျားထက်တုတ်တယ် တဝက်လောက်နဲ့ ညှောင့်နေ့ပီး နို့ ကိုစုံကိုင်ထားတယ် နောက်ပီး နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်တယ် ကျမလည်း သူ့ကိုပြန်ဖက်ပီး သူ့နှုတ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်လိုက်တယ်
ဆရာမ ထပ်သွင်းမယ်နော် ကျမလည်း အင်း လိုက်မိတယ်
ဗြစ် ဗြစ် ဖွတ် ဘွတ်
ခနလေးပါ ဆရာမ ရယ် အင့် ရော့
သေပီ အားးးးးဘွတ် အားးးနာတယ်လို့ တအားလုပ်ထာပဲ သူ့လီးက အကြီးကြီးနဲ့
နောက်တော့ သူပြောသလို ဆောင့်ရင်း ဆောင့်ရင်းနဲ့ ကောင်းလာတယ် သူကလည်း လုပ်နိုင်တယ် ၁၅မိနစ်လောက်ကို မနားတမ်း ဆက်တိုက်ဆောင့်နေတာ လီးကလည်း အဆုံးထိအောင်ကို ဆောင့်တာ ဆီးခုံချင် တဖတ်ဖတ်ရိုက်နေတာ ကျမလည်း ကောင်းလာတော့ ကော့ပေးမိတယ် ဒါကို သူက ရိတ်မိတော့
ဆရာမ ကျနော် မြန်တော့မယ်
ကျမလည်း အင်းပါရှင် လို့ပြောမိလိုက်တယ်
ဘွတ် ဗျိ ဗျိ လီးက အဆုံးဝင်သွားပီး အထဲမှာ ကြိတ်လိုးနေတယ် သူနဲ့ကျမ မျက်နာက ကပ်နေတာပေါ့ သူက ကောင်းလားဟင် လို့မေးတယ် ကျမလည်း အင်း လို့ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်တယ်
အဲလိုသူက ပြောရင်းနဲ့ ထိုးထည့်ဆောင့်ချလိုက်တော့
သူ လုပ်ပေးတာ ကောင်းတယ် ပြောနေတာလေ
ဘယ်က သူလည်း ကွာ
ရှင့် ကို ပြောနေတာရှင့် ရှင်လုပ်ပေးတာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောနေတာ
အသားယူမှန်း သိပေမဲ့ ကျမလည်း ဖီးလ်တက်နေတော့ ပြောမိတယ်
ရှင့်လီးကြီးနဲ့ ကျမ စောက်ပတ် ကို လိုးပေးတာ အရမ်းကောင်တယ် ရှင့်
ဆရာမ ရယ် အဲလိုပြောရင် လိုးလို့အရမ်းကောင်းလို့ ပြောတာပါ ပြောမယ်နော်
တကယ်ကို လိုးနိုင်တယ် ရှင် ကျမ တခါပီးလို့ သူမပီးသေးဘူး
ဒီတခါ နောက်ဆုပ်ပီး အားနဲ့ ဆောင့်ချလိုက်တယ်
ဘွတ် ဒုတ် ဗြိ ဗြစ်
အားးးအမလေး နာတယ် နာတယ် ရှီးးးး
ဒီလောက်ကြတ်သတ်ပီး သူ့လီးကြီးက ထိုးခွဲသွားတာ ကျမစောက်ပတ် ထဲမဝင်ပဲနေပါ့မလား
သူလည်း အဲလိုပြောတော့ ဆောင့်အားက ပိုလိုးလာတယ် ကျမလည်း သူ့ကိုဖက်ပီး
ဆောင့်ဆောင့်ကောင်းနေပီ အရမ်းဆောင့် ရှင့်စိတ်ကြိုက်ဆောင့်နော်
သူလည်း အားးးအရမ်းကောင်းတယ် စောက်ပတ်လေးက စီးပီးနူးညံ့နေတာပဲ
အင့် အင့် အင့်
ကျမလည်း ဟင်းးး အင်းးးးသူ့ကိုပိုဖက်ပီး ပီးခါနီးတော့ ကော့ပေးလိုက်တယ် ကျမအရည်တွေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့လီးထဲက အရည်တွေဟာ ကျမစောက်ပတ်ထဲပန်းချလိုက်တယ် ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို စောက်ပတ်ကနေ ညစ်ပေးလိုက်တယ် အရည်တွေအားလုံးကျမအဖုတ်ထဲဝင်ပီး အိပ်ယာပေါ် ပြန်စီးကျလာတယ် သူလည်းကျမညာဘက်ဘေးလှဲချလိုက်တယ်
ကျမလည်း သူ့မျက်နာပေါ်က ချွေးတွေကို လက်ဖဝါးလေးနဲ့ သုတ်ပေးလိုက်တယ် သူကလည်း ကျမပါးလေးတွေ နမ်းလိုက် နို့ ကိုနယ်လိုက် ပေါ့
ကျနော့် ကို သူ လို့ခေါ်နေမှာလား
သူကကော ဆရာမ လို့ခေါ်နေတာလေ
အင်းပါ ဒါဆို လင်လေး လို့ခေါ်ပေါ့ ကျနော်က ဒုတိယ လင်ကို
အမယ် လင်လေး မခေါ်ပါဘူး လင်ကြီးလို့ပဲ ခေါ်မှာပေါ့
ဘာလို့တုန်း ဆရာမ ကလည်း
ကျမယောက်ျား ထက် ရှင်ဟာကြီးက ပိုကြီးလို့ လင်ကြီးလို့ခေါ်လိုက်မယ် သိလား ကျမလည်းသူ့လီးကြီး စုပ်ကိုင်လိုက်တယ်
အင်း တကယ်ပဲ အရမ်းကြီးတယ် သူက ပပထက်ကြီးတော့ ကိုကိုလို့ခေါ်မယ်လေ ကိုကိုကလည်း ကျမကို ချစ်လေးလို့ခေါ်ပေါ့
အင်း ကောင်းတယ် ကိုကိုနဲ့ ချစ်လေးပေါ့
ပြောရင်း နဲ့ကျမလက်ထဲမှာ သူ့လီးကြီးတောင့်တင်းလာတော့
ဟော ကိုကို ကောင်ကြီးပြန်ထလာပြန်ပြီ
အဲဒါ ချစ်လေးကို လိုးချင်လို့ပေါ့ ဒီတခါကုန်းပေးလေ
ကျမလည်း သူ့လီးကြီးကို ကိုင်ပြီး အရမ်းကဲတာပဲ ပြောပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ် သူလည်းနောက်နေ နေရာယူပီး သူလီးကြီး အဖုတ်နှုတ်တေ့ပြီးသွင်းလိုက်တယ်
ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်
အားးးးးးရှီးးးးးရှီးးးးးးဖြေးဖြေးစလုပ်ကွာ ကိုကိုလီးကကြီးတော့ နှုတ်ခမ်းတွေစပ်နေတယ်
အင်းပါ ချစ်ရယ် ဖြေးဖြေးလိုးပါ့မယ်
အင့် အင့် အင့် ရော့ လိုးရင်းနဲ့နောက်ကနေကြည့် ဒီဆရာမ ဖင်ကဖြူဖွေးပီးလုံးနေတာပဲနောက်ကနေဆောင့်လိုက်ရင် ဖင်ကတုံတက်သွားတယ် သူ့ဆီကလည်း တအားအားနဲ့ အိမ်ကမိန်းမလိုးရတာနဲ့ ကွာပါ့လား ဒါနဲ့ ကျုံးတွယ်လိုက်တယ်
ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်
အားးးးးးးရှီးးးးးးးးးကိုကို ကောင်းတယ် ချစ်ကိုအရမ်းလိုးလိုက် ကိုကို စိတ်ကြိုက်တာလိုးနော်
ကျနော်လည်း သူဖင်ကိုကြည့်ရင်နဲ့ ပန်းရောင်သန်းနေတဲ့ ဖင်ပေါက်လေးကို လက်မနဲ့ ကလိ လိုက်တယ် သူလည်းတွန့်သွားတယ်
ကိုကို ဘာလုပ်ထာလည်း ချစ်ဖင်ပေါက်ကို မလုပ်ရဘူးနော်
ချစ်ကလည်း ကောင်းလာမှာပါ စမ်းကြည့်လေ
ဟာ မရဘူး မရဘူးနော်
ဒါနဲ့ကျနော်လည်း စောက်ဖုတ်ကိုပဲလိုးထားလိုက်တယ် သူလည်းအော်ရင်း ကျနော်လီးက လည်းကျင်တက်လာပီး သူစောက်ဖုတ်ထဲအရည်တွေပန်းချလိုက်တယ်သူလည်း
ပီးတော့မယ် ကိုကို ထွက်ပီးထွက်ပီး အားလို့အော်ရင်အိပ်ယာပေါ်မှောက်ချလိုက်တယ် သူလည်းကျမအပေါ်ထပ်လျက်ကျလာပီး အမောဖြေနေတယ်နောက်တော့ ဘေးလှဲချပြီး ကျမကို သူ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ထားတယ် ကျမလည်း သူ့လိုးချက်ကြောင့် ပြိုင်းသွားပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ် မိုးလင်းတော့ နိုးလာပြီး အပြင်အခန်းနားခြင်းသိမှာစိုးတော့ အိပ်ယာထဖို့လုပ်ရာ သူလည်းနိုးပြီး ကျမကိုဇွတ်ဖက်ထားတယ်
ထချင်သေးဘူးကွာ ချစ်ချင်သေးတယ်ကွာ ပြောပြီး ကျမ နို့ကို နယ်နေတယ်
တော်ပြီကွာ ချစ်က အတန်းဝင်ရမှာလေ
မရဘူးကွာ ဆိုပီး ကျမ ပေါင်ပေါ်တက်ခွလိုက်တယ် သူ့လီးကြီးကလည်းမာတောင်ပီး အပေါက်ရှာနေတယ် ကျမလည်း သူ့လီးကို ကိုင်ပီးတေ့ပေးလိုက်တယ်
အားးး ကိုကိုရယ် တော်ပီလေ ချစ်အတန်းဝင်ရအုံးမှာ ညကလည်း ကိုကိုအရမ်းလုပ်ထားတာ မဝသေးဘူးလား အ အု
ကျမကို စကားပြောခွင့်တောင်မပေးတော့ပဲ နှုတ်ခမ်းစုပ်ပီး အရမ်းလိုးတော့တာပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်ချရင်းနဲ့ ကျမအဖုတ်ထဲ သူအရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် အချိန်တော့ရပါတယ် မိုးလင်းတယ်ဆိုတော့ ရေမိုးချိုးအလှပြင် ကိုသံချောင်းလည်း ရေမိုးချိုး ပြီး ဧည့်သည်ပုံစံနဲ့ရောက်သလိုခနနေပြီးပြန်သွားနော့တယ် ကျမအဖုတ်လည်း ကျိန်းစပ်နေတယ် လူကလည်းပြိုင်းနေတယ် လမ်းလျောက်ရင်အဖုတ်ကနာနေတော့ သတိထားပီးအတန်းဝင်လိုက်တယ် ကျောင်းသူလေးတွေက တချို့မိတ္တူလာဆွဲကြတယ် မောင်က ခရီးသွားတော့ ကျမကပဲလုပ်နေရတယ် ခလေးမလေးတွေက ဦးမရှိဘူးလားမေးတယ်
ညီးတို့ ဦးက ခရီးသွားနေရလို့ ပြောလိုက်ရတယ်
ခနလောက်နေတော့ မောင့်ဖုန်းလာတယ် ဒီနေ့ထမင်းစားချိန်ရောက်မယ်ပြောထားတယ် မနက်က ကိုသံချောင်းလိုးထားလို့ အဖုတ်ကနာနေတာ မောင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း
မောင်ဒီနေ့ပြန်လာမယ် ဆိုလို့အတန်းဝင်ပြီးအနားယူလိုက်တယ် တရေးတမောခနအိပ်တယ် ကျောင်းသားရေးရာက Roll callတောင်းလို့ဌာနကိုသွားလိုက်တယ် Roll callစာရင်းတွက်နေရင်း ဆရာမလေး သန္တာအောင်က ဂျူတီစောင့်နေရင်က ပြန်မယ်လုပ်တော့ သော့ပေးခဲ့ပြီးပြန်သွားပါလေရော ဒါနဲ့ စာရင်းသေချာစစ်ဆေးနေတာနဲ့အချိန်ကညနေရောက်မှန်းမသိရောက်လာတယ် ဒါနဲ့သန့်ရှင်းရေး ဦးမြင့်နိုင် ရောက်လာပြီး
ဆရာမ စောင့်ပေးရမလား လို့မေးလာတာနဲ့
ခနနေရင် ပီးပီ ဦးမြင့်နိုင်
ခနနေတော့ Roll call တွက်ပီးတော့ မောင့်ဆီက ဖုန်းလာတယ် အလုပ်တွေမပီးလို့ ဒီနေ့ပြန်မရောက်ဘူး ပြောတယ် ကျမလည်း ကွန်ပျူတာပိတ်တော့မလို့ လုပ်တုန်းEmail ဝင်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျမ ရာထူးတိုး ရွှေ့ပြောင်းပါလာတော့ ဝမ်းသာလွန်းလို့အော်မိလိုက်တယ် အားစ် ဦးမြင့်နိုင်က ပြန်လာပြီး
ဒါဆို ကျနော်တို့ကို ကျွေးအုံးလေ
ကျွေးမှာပေါ့ ခုအခန်းထဲတော့ဘာမှ မရှိဘူး ဦးမြင့်နိုင် ဘာစားချင်လို့လည်း လောလောဆယ် ကင်တင်းတွေကလည်း ပိတ်နေတော့ လက်ဘက်ရည်သွားဝယ်ပေးလေ ကျမအတွက်ပါ တခွက် ဝယ်ခဲ့နော် မုန့်ပါဝယ်ခဲ့ ၅ထောင်တန်တရွက်ထုပ်ပေးလိုက်တယ်
မောင်ဆီဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားလိုက်တယ် မောင်ကလည်း ဝမ်းသာတဲ့ အကြောင်းပြောတယ် ခွဲနေရရင် ဆာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ပြောတော့ မောင်ဆီပြန်လာမှာပေါ့လို့ ဒါနဲ့ မောင်က ဖုန်းထဲကနေ ဆက်ချက် (ချက်ထဲကနေ လိုးခြင်း) ပါလေရော ကျမ ပိပိကလည်း အရည်စိမ့်ကျလာတယ် တခါးက စိထားတော့ ဘယ်သူမှမမြင်လောက်ပေါ့ ကျမလည်း ထဘီအပေါ်ရံကပွတ်နေမိတယ် ဦးမြင့်နိုင်ပြန်ရောက်ထာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး သတိထားမိလိုက်တော့ ကျမပွတ်နေတာ သူမြင်သွားတယ် မျက်နာက အဆီတွေပြန်ပြီး သူ့မျက်လုံးက ကျမရဲ့အောက်ပိုင်းကို ကြည့်နေတယ် ကျမလည်းရှက်သွားတာပေါ့ သန့်ရှင်းရေးတယောက်က ကြည့်တာကို စိတ်ကလည်း လှုပ်ရှားနေတာကို သူလည်း အနားကပ်လာပြီး ကျမကိုဖက်တယ်သူလည်းတုန်တုန်ရည်ရည်နဲ့ ဖက်ထာ ကျမလည်းမောင်နဲ့ ဆက်ချက် (ချက်ထဲကနေ လိုးခြင်း) ထားတော့ သူ့ကို ပြန်ဖက်မိတယ် ဦးမြင့်နိုင်က ကျမ နှုတ်ခမ်းကို ဆွဲစုပ်တယ် ကျမလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ရင်တွေကတော့ ခုန်နေတယ် သူလက်ကြီးက ရင်ဖုန်းအင်ကျီအပေါ်ကနေ နို့ကိုနယ်တယ် ကျမလည်းတံခါးဖက်ကြည့်လိုက်တော့
သူလည်းတံခါးသွားပိတ်တယ် ပြန်လှည့်လာပီး ကျမကို ပြန်ဖက်တယ် နို့ကိုလည်း အရမ်းနယ်တယ် အိမ်ပြန်တော့မှာဆိုတော့ အင်ကျီကျေလည်း မသိပါဘူး လွှတ်ထားလိုက်တယ် နှုတ်ခမ်းက ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလည်း ပျက်ကုန်တာပဲ သူ့အချောင်းကြီးကလည်း ဆီးခုန်ကို ထောက်နေတယ် အရည်တွေကလည်းထွက်နေတယ်
သူလည်းအင်ကျီကြယ်သီးတွေဖြုတ်လိုက်တယ် မှောင်ရည်သန်းတော့ ဘယ်သူ့ မှတော့မလာကြပါဘူး ကြယ်သီးပြုတ်တော့ ဘယာစီယာဂျိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်တယ် ဖြူဖွေးစွာပေါ်လာတဲ့ နို့ကိုနယ်တယ် အသီးလေးကိုလည်း ဆွဲစိတ်တယ်
အားး နာတယ် ဘာလို့စိတ်တာလည်း
အင်းပါ ကျနော်လည်း ဆရာမလေး ကို ပွေ့မလိုက်ပီးစာကြည့်စားပွဲရှည်ပေါ် ကန့်လန့်ပြတ်တင်လိုက်တယ် ပေါင်ကြားဝင်ပြီး သူ့စောက်ပတ်ကို ယက်လိုက်တယ် ကြားထဲကို လျှာသွင်းပြီးထိုးထည့်လိုက်တယ် နောက်တော့စုပ်လိုက်တယ်
အားးးးးးရှီးးးးးးးယားတယ် အရည်တွေလည်းထွက်လာတော့ ပေါင်ကြားဝင်ပြီး လီးထိပ်နဲ့ အစေ့လေးကို ထိုးလိုက်တယ်
ဗြိ ပြစ် တစ် တစ် ဖွတ် ရှူးးးးးး
အားးးးးးးးနာတယ် နာတယ် အားးးအကြီးကြီးပဲ
ဝင်တာပေါ့ အထဲမှာ ကြတ်နေတာပဲ
ဆရာမ အဖုတ်က အရမ်းသေးတာကို
ရှင့်ဟာကြီး က အရမ်းကြီးလွန်းပါတယ် အဲလိုပြောတော့ ဖြေးဖြေးခြင်းထည့်လိုက် ပြန်ထုက် တခါတခါလီးက အဆုံးထိထည့်လိုက် ပြန်ဆုပ်တော့ ကျွတ်မှာစိုးလို့ ကော့ပေးမိတယ် ကောင်းလည်းကောင်းတယ်လေ
အင်း ရပါတယ် ဖြေးဖြေးတော့လုပ်အုံး
နာရာကနေ ကောင်းလာတော့ မတားချင်တော့ဘူး သူ့ကျောပြင်ဖက်ရင်းနဲ့ ကုတ်မိတော့တယ် သူလည်း အကုတ်ခံရတော့ ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ
အင်းး အင်း ချစ်တယ်
ဒါဆို ဆောင့်ပီ ရော့ အင့်
အားးးးးးးရှီးးးးးးးးးကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ကျမလည်းကောင်လွန်းလို့ပါးစပ်ကလည်း မရှက်နိုင်တဲ့ ညစ်ညမ်းစကားများထွက်တော့ာပဲ အဲလိုပြောမှလည်း ကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိတယ် ဦးမြင့်နိုင်ကလည်း ကျမအဲလိုပြောတော့သူလည်း အရမ်းလိုးဆောင့်ပီး ကျမစောက်ပတ် ကလည်း သူလီးစုပ်ယူပီးအရည်တွေပန်းချမိတယ် သူလီးလည်း အရမ်းဆဲစုပ်ထားတော့ အချက်၃၀လောက်ဆက်တိုက်ဆောင့်ပီး ကျမစောက်ပတ်ထဲသူအရည်တွေပန်းချလိုက်ထာ အဖုတ်ထဲပြည့်လျံသွားတာပဲ အထဲမှာ ခနစိမ်ထားသေးတယ် ဆွဲထုပ်လိုက်ရော အရည်တွေစားပွဲပေါ် စီးကျပါလေးရော အခန်းထဲက တစ်ရှူးနဲ့သုတ်လိုက်ရတယ်
ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်တော့ နောက်ကနေ လုပ်ချင်သေးလို့ ပူဆာနေတယ်
တော်ပီလေ အဆောင်ပြန်ရတော့မယ်လေ သူလုပ်ထားလို့ နာနေတယ်
အင်းပါ လူရှင်းလို့ မရှိမှ လာလေ
ကျမလည်း ဌာန အခန်းကနေ ထွက်လာပီး ကိုယ်နေတဲ့အဆောင်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပီး သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် နေလိုက်လိုက်တယ်လန်းသွားတာပဲ မနက်ကတယောက် ခုညနေပိုင်းမှာ သန့်ရှင်းရေးဦးမြင့်နိုင်ကပါ လိုးထားတော့ အဖုတ်က ကျိန်းနေပီး နောက်ပီးတော့ပြောင်းရမှာဆိုတော့ မမြင်ရတော့ဘူးလေ ခုလည်းညပိုင်းလာအုံးမယ်ဆိုတော့ ကဲကျမ ပပမင်း ပေးရအုံးမှာပေါ့ ဒါနဲ့ ၈နာရီဆိုတော့ အခန်းနီးချင်းတွေက မအိပ်ကျသေးဘူးလေ ၉နာရီကျတော့ အခန်းတခါးတွေ ပိတ်ကျတယ် ၁၀နာရီထိုးခါနီးတော့ တခါးလာခေါက်တယ် ဒါနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်မိတယ်
အိပ်တော့မလို့ပဲ ပြောရင်းနဲ့ ဦးမြင့်နိုင် အခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ် ရှေ့ခန်းမှာ ထိုင်ရင်းနဲ့ TV ကြည့်ကျတယ် စကားပြောရင်းနဲ့ ကျမလက်ခလေး ကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဆုပ်ကိုင်တယ် သူ့ဘယ်လက်နဲ့ ကျမပခုန်းလေးကိုကိုင်ပီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းတယ် ကျမလည်း သူရင်ခွင်ထဲကျလာပီး မှေးစက်မိတာပေါ့ မေးလေးကိုင်ပီး ကျမနှုတ်ခမ်းကို စုပ်တော့တာပဲ ကျမလည်း ပြန်စုပ်မိတယ်မောင်ပြောဘူးတယ် ဝက်သားစားပါများရင် အီလာလိမ့်မယ်တဲ့ ချဉ်ဟင်းစားကြည့် အအီပြေပြီးအရမ်းကောင်းတာခံစားမိလိမ့်မယ်တဲ့ ဒါကြောင့်ဦးမြင့်နိုင်ကို လက်ခံမိတယ်လေ ကျမပါးစပ်ထဲသူ့လျှာကြီးဝင်လာတယ် ကျမလည်း စုပ်ပေးလိုက်တယ် ကျမ လျှာကိုလည်း ဆွဲစုပ်တယ်
ဖြေးဖြေလေ အရမ်းစုပ်တာပဲ လီးကြီးကလည်း ချက်လာထောက်တယ် လက်က ကိုင်ကြည့်တော့
ဟာ သူ့ဟာကြီးက အရမ်းထနေတာပဲ
သူက ဆရာမ ဟာလေးထဲနေချင်လို့တဲ့
ဒါဆို အခန်းထဲသွားရအောင်လေ ကျမလက်ဆွဲပီး အခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ် လိုင်းခန်းဆိုတော့ အိပ်ခန်းသိနေတာပေါ့ ခုတင်နားရောက်တော့ ကျမအင်ကျီ ချွတ်ပါလေရော ဘယာစီယာကိုတော့ ကျမကပဲဂျိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်တယ် နို့ကိုနယ်ပီးပွတ်တယ် နို့သီးလေးကို စို့တယ် အရမ်းကို စို့တာ
သူလည်း တဖက်ကိုနယ် တဖက်စို့ပေါ့ နောက်လက်က အောက်ဆင်းပီး ထဘီအောက်ကနေ ကျမစောက်ပတ်လေးကို ပွတ်တော့တာပဲ အစေ့ကို ချေတယ် နောက်တော့ လက်ညှိုးကအဖုတ်ထဲသွင်းထဲလိုက်တယ် အရည်တွေကလည်းအရမ်းထွက်နေတော့
ဗြလစ် ပလစ် ကျမ စိတ်လာတော့ သူတက်ခွပါလေရော ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ရင်းနဲ့တိုးတိုးလေးပြောတယ်
ကျနော် လီး စုပ်ပေးပါ့လား
ဟင် ကျမယောက်ျားလီးတော့စုပ်ပေးဘူးပါတယ် သူလိုလူက စုပ်ခိုင်းမယ်လို့တော့ တွက်မထားမိဘူး အဲလိုတွေးနေတုန်း ပါးစပ်ထဲသူ့လီးကြီး ဝင်လာပါလေရော
အု အု အွတ် အွတ်
ကျမလည်း သူ့လီးကိုစုပ်ပေးလိုက်တယ် လီးထိပ်ကိုလည်း ရေခဲချောင်စုပ်သလို စုပ်ပေးလိုက်တယ်
ပေါင်ကြားဝင်ထိုင်ပီး လီးက အဖုတ်တေ့ထားပြီးသွင်းချလ်ုင်တယ်
ဗြစ် ဗြစ် အင့်
ဟွန့်နော် ဒီလောက် သူ့စိတ်ကြိုက်ပေးထားတာကို
အင်းလေ ကျနော်လိုးပေးတာကကော မကောင်းလို့လား
ကြည့်ပါလား ဘာတွေလျောက်ပြောနေတာလည်းကွာ ကောင်းလို့ပဲ ခုနောက်တခါပေးနေတာလေ တကယ်ပဲ သူ့ဟာကြီးက အရမ်းကြီးတာ သူများထဲ ကြတ်နေတာပဲ
အဲလိုပြောလို့လား မသိဘူး ပိုဆောင့်ချတယ်
ဘွတ် ဗြစ် ဗြစ်
အားးးးးနာတယ် ဖြေးဖြေး လို့ပြောထားတယ်လေ
ဆောင့်ပါ့များတော့ အရည်ကလိုက်လာပီတဖြေးဖြေးကောင်းလာတယ် လီးကြီးတဇွတ်ဇွတ်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတော့
ရော့ အင့် ဘွတ်
ချစ်က ကျနော်ကို ဘယ်လိုခေါ်တယ်
နိုင်နိုင်လို့ခေါ်လိုက်ထာလေ သူများကိုအရမ်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးတော့ ခေါ်မိတာပေါ့
နောက်လည်း လုပ်ပေးမယ်လေ ချစ်ကပေးပေါ့
ကျမလည်း ကုန်းထပြီးသူဘက်ကို ကျောပေးပြီးကုန်းပေးလိုက်တယ် အဖုတ်ထဲဝင်လာမဲ့ လီးကိုမျှော်မိတာပေါ့ သူလည်း သေချာတေ့ပီးသွင်းတယ်
ဘွတ် ဖွတ် ရှူးးးးးးးးး
အဝနားက အရည်တွေများတော့ တန်းဝင်ပီးအထဲရောက်လေ ကျမစောက်ပတ်ကကျင်းတော့ လေသံပါ ထွက်လာတယ် အရည်တွေကလည်းအရမ်းထွက်တော့ မကြတ်တော့ပေမဲ့ သူ့လီးကကြီးတော့ ချောင်မနေဘူး ဆောင့်ချက်ကိုအရှိန်တင်ပြီးဆောင့်ချတယ်
ဘွတ် ဒုတ် ဗြွတ်
အားးးးးး သေပါပြီ မောင်ရယ် နာတယ် အရမ်းဆောင့်ချတာပဲ
ချစ် အရမ်းကောင်းလို့ ချစ်ဖင်က ဖြူဖွေးပီးတောင့်တော့ ဆောင့်မိတာပါ နောက်လည်း မောင်လို့ခေါ်ကွာ ချစ်လား
အင်း အင်းး အင်းပါ မောင်ရယ် ဆောင့်ပေး အားးမောင်ရယ်
ကျနော်လည်း ဆောင့်ကောင်းနဲ့ ဆောင့်ချလိုက်ထာ စော်ကြီးကတအားထန်နေပါ့လား သူ့ယောက်ျားက လိုးမပေးနိုင်လို့လားအဖုတ်ကလည်း အရည်တွေအရမ်းထွက်နေတော့ လက်နဲ့ သွားစမ်းမိတယ် သူဖင်ပေါက်ကိုကြည့်မိတော့ နီတာရဲလေးဖြစ်နေတယ် လက်ထဲက ချွဲကျိကျိအရည်နဲ့ သူဖင်ပေါက်ကိုသုတ်လိုက်တယ်
မောင် ဘာလုပ်မလို့လည်း မလုပ်ရဘူးနော်
ခံစားကြည့်စမ်းပါ ချစ်ရယ် ကျနော်လည်း လက်ညှိုးထိုးကြည့်လိုက်တယ် ဝင်သွားတော့ အဖုတ်အစေ့ကိုလည်းလှမ်းပွတ်ပေးတယ် ဒါနဲ့ အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်တော့ အဖုတ်ထဲကနေ လီးထုပ်ပီး သူ့ဖင်ပေါက်ကိုတေ့ပီး ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တယ်
ပြစ် တစ် တစ် တစ် ဘွတ်
ကျနော်လည်း ဒီဆရာမ စောက်ဖုတ်လိုးရင်းက ဖင်ထဲထည့်လိုးတော့ တော်တော်ကြတ်ထာပဲ ကျနော်က ဖင်ကိုပါကင်စဖွင့်တာ သူလည်းတော်တော်ခံနေရတော့ အရမ်းမကြမ်းရဲသေးဘူး တော်ကြာဖင်ကွဲသွားမှာစိုးရသေးတယ် ဒါနဲ့ချော့လိုးနေရတယ် သူစိတ်လာအောင် လက်က ရှေ့က အဖုတ်ကို ကလိပေးရတယ် နောက်တော့ လူးလွန့်လာတာနဲ့ ဆောင့်အားတင်လိုက်တယ်
ဘု ဘွတ် ဗြိ ဖွတ်
အားးးးးရှီးးးးဟင့် အင့် အားးးး
မောင် တမျိုးကြီးပဲ နာလည်းနာတယ် နောက်ပီး
မသိဘူး လုပ် လုပ်
ကျနော်လည်း အားစိုက်ပီး ရော့ အင့် ဘွတ်
သူက လည်းပြီးချင်တော့ ကျနော်လီးကို သူဖင်ပေါက်က ဆွဲစုပ်သလို လုပ်တော့ လီးကကျင်ထွက်လာပီး ဖင်ပေါက်ထဲထည့်လွတ်လိုက်တယ် ဆရာမကစောက်ပတ်က အရည်တွေကလည်းအိပ်ယာပေါ်ပန်းချလိုက်တယ် ကျနော်လည်း သူ့အျပ်ါထပ်လျက်ကြီး လီးကိုဆရာမ ဖင်ထဲစိမ်ထားလိုက်တယ် ခနနေတော့ လီးကိုဆွဲထုပ်ပီးဆရာမ ဘေးနားလှဲအိပ်လိုက်တယ် အရည်တွေကလည်း ဖင်ထဲကနေ အပြင်ထွက်ကျလာတယ်
ဟူးးးးးးးးးးး လို့ကျနော့အသက်ရှူလေတွေထုပ်လိုက်တယ် ဆရာမ ကို ကျနော်ဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်တယ် နှုတ်ခမ်းစူနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်တယ်
ဟွန့် သွားပါ သူများကို မသနားဘူး
ဘာလို့ရမှာလည်း သူများဟိုဟာကို လုပ်တယ်
ဘာရမှာလည်း ဖင်ပေါက်ကို လုပ်ထာပြောတာ အိမ်က ယောက်ျားတောင် မခံဘူး ဇွတ်ကြီးမပြောမဆိုနဲ့ လုပ်ထာ သူ့ဟာကြီးက နဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး
အရင်နာတယ် မောင်လီးကကြီးကြီး ချစ်ဖင်ပေါက်ကသေးသေးလေးရယ် တကယ်ပဲရအောင်လိုးတယ်
လိုးပေးတယ် မောင့်လိုမကြမ်းဘူး မောင်လီးလောက်လည်းမကြီးဘူး
မောင် ဟိုဟာ မလုပ်ရဘူးနော်
အင်းပါ ကျနော် ဆရာမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေလိုးလိုက်တယ် ဖင်ကိုမလိုးဖြစ်ပေမဲ့ ဖင်ပေါက်ကိုတော့ လက်နဲ့ထိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် တညလုံးလိုးပေမဲ့ မနက်စော၎နာရီ ထပီးပြန်ခဲ့ရတယ် ပြန်ခါနီးတချည်တော့လိုးခဲ့ရပါတယ် အိမ်ချင်မူးတူးနဲ့ ရအောင်လိုးခဲ့ရပါတယ်။
ကျမလည်း ယောက်ျားနဲ့အဲလောက်ကြီး မနေခဲ့ပေမဲ့ ကျောင်းကသန့်ရှင်းရေးနဲ့ကျမှအလိုးခံလိုက်ရတယ် တော်တော်လိုးနိုင်တဲ့လူကြီး အင်းလေ အပြင်မှာရှာလိုးရင်တောင် အပေါစားပဲရမှာ ခုဟာက ဒေါက်တာဆရာမ တယောက်ကိုလိုးရတော့ အားရအောင်လိုးသွားတာ အိပ်ချိန်တောင်မပေးဘူး မနက်၎နာရီထိုးတော့ သူ့ကိုနိးပြီးပြန်ခိုင်းတာ သူလည်းထပြီး ကျမထဘီ ချွတ်ပြန်တယ်
ဟာတော်ပြီလေ ဒီမှာနုန်းနေပြီ အဝှာကလည်း ကျိန်းနေပြီ
အရမ်းအနိုင်ကျင့်တာပဲ ဒါနဲ့ ကျမလည်းပလက်ပေါင်ကားပေးလိုက်တယ် သူလည်းပေါင်ကြားဝင်ပြီး လီးကြီးကျမအဖုတ်ကိုတေ့ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ်
ဘွတ် ဖွတ် လီးကလည်း လိုးတိုင်းမာနေတာပဲ
အင့် ရော့ ဘွတ်
အင်းးးးအားးးးဝင်တယ် အရမ်းနာလို့အော်နေတာ မောင်ရဲ့လီးဝင်လို့ပေါ့ ဒါပေမဲ့နောက်တော့လည်း ကောင်းတယ် ရှက်လာပီကွာ
ချစ် လေ မောင်ရဲ့လီးကို စွဲနေပြီ ရှင့် ချစ်ကိုလိုးပေးရမယ်နော်
အဆင်ပြေသလိုပေါ့ ခုတော့ ဆောင့်ပေးအုံး
အားးးရှီးးးးးးးးကောင်းးတယ် ဆောင့် ဆောင့် ပီးတော့မယ် အားးးးကျမပီးလို့ သိတ်မကြာခင်ကျမအဖုတ်ထဲအရည်တွေပန်းထည့်လိုက်တယ်ခနစိမ်ထားပီး သ့လီးကြီးဆွဲထုပ်လိုက်တယ် သူလည်းခနနေပြီးပြန်သွားတယ်။
ပပ အရေးပေါ်သွားရတာလေ ရော့လမ်းကနေ ကိတ်မုန့်ဝယ်လာတယ်
အင်းပါ ဒါကြောင့်မောင့်ကို ချစ်ရတာ
ပပ အတန်းဝင်စရာ ရှိလား
မောင်က သူပုဆိုး ချွတ်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ကျပါးစပ်နားလာတေ့ပေးတယ် ကျမလည်စုပ်ပေးလိုက်တယ် မစုပ်ခင်ကထဲကတောင်နေတာ ကျမပေါင်ကြားဝင်ပီး သူ့လီးနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်
လီးက ပုံမှန်ဆိုက်ပါ အစောကဦးမြင့်နိုင်လိုးထားလို့နာနေတာ မောင်ကထပ်လိုးတော့နာတဲ့အရှိန်ကကျန်သေးတော့ အော်မိတာ မောငိကတော့ သူလိုးလို့နာတယ်ထင်ပြီး သဘောကျနေတာပေါ့ သိတ်မကြာခင်၂ယောက်လုံးပြီးကြတယ် မောင်ရင်ခွင်ထဲဖက်ပီးအိပ်ပျော်သွားတယ်
မနက်စောအတန်းချိန်မရှိပေမဲ့ ပြောရွှေ့ရစာပို့ပြီးမှ ပါချုပ်ကိုကန့်တော့ရသေးတယ် ပါချုပ်ကလည်း အသက်ကြီးပေမဲ့ သူ့မျက်စိက မရိုးဘူး ဖင်ကြည့်လိုက် နို့ကြည့်လိုက်နဲ့ ကန့်တော့ထားတဲ့ပစ္စည်းသူ့အခန်းပို့ပေးလိုက်တယ် ပုဆိုးကို ခုတင်ပေါ်ထားလိုက်တော့ နောက်ကနေအဖက်ခံလိုက်တော့
အို ဆရာကြီးကလည်း ဘာလုပ်ထာလည်း
ဆရာမ က အရမ်းလှတော့ မနေနိုင်ဘူးကွာ
သူလက်ကြီးက ကျမနို့ကို စုပ်နယ်ထားတော့ ပိပ်ကလည်းအရည်စိမ့်လာတယ် ဒါနဲ့ဆရာကြီးကိုပြန်ဖက်လိုက်တယ် နောက်တော့တိုင်ပင်မထားပဲ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်မိကျတယ် သူလျှာကြီးကကျမပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ် စုပ်ပေးလိုက်တယ် ခနနေတော့ ကျမအင်ကျီကိုချွတ်တယ် ဘယာစီယာဂျိတ်ကိုလက်တဖက်ထဲနဲ့ဖြုတ်လိုက်တယ် တော်တော်ကျွမ်းတယ် ဒါနဲကျမရဲ့နို့ကိုနယ် ပွတ်တယ် နို့သီးလေးကို ချေတယ် အိပ်ယာပေါ်လှဲချတော့ ထပ်လျက်ကြီး နို့ကိုစို့တယ် အရမ်းစို့တာပဲ တဖက်ကိုနယ်ထားတယ် နို့က်ုင်တဲ့လက်ကနေ အောက်ဆင်းပြီး အဖုတ်ကိုပွတ်တော့တာပဲ အရည်တွေကလည်း စိမ့်ကျလာတယ် လက်ကြီးက အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တော့
နောက်ပြောရင်းနဲ့ ပေါင်ကြားခေါင်းဝင်ပြီး ကျမအဖုတ်ကိုယက်ပါလေရော
ယက်ရင်းနဲ့တပါတ်လည်ပြီး လီးကြီးက ကျမပါးစပ်နား ရောက်လာတော့ လူကြီးသလောက်လီးကြီးတယ် စုပ်ပေးလ်ုက်တယ် ဒစ်ကိုစုပ်ပေးလိုက်တော့
ကောင်းတယ် ပပရယ် ပြီးသွားလိမ့်မယ် ပေါင်ကားလိုက်ကွာ ကျမလည်းကားပေးလိုက်တယ် ပေါင်ကြားဝင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းတယ်
ဖြေးဖြေးလုပ်လည်း ကိုလီးက အရမ်းကြီးတာကို
ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ်
ဘွတ် ဘွတ် ဗြိ
ကျမလည်း သူရင်ဘတ်ကြီးက်ု ထုပြစ်လိုက်တယ်
ပပအဖုတ်က အရမ်းကောင်းလို့ကွာ အောင့်ခံပေးကွာ
ဆောင့်ပါများတော့လည်း ကောင်းလာတယ် အရည်တွေကလည်းထပ်ထွက်တယ် ကျမလည်း ကော့ပေးမိတယ် ဒါကိုသူက ရိပ်မိတော့
အင်း အရမ်းကြီးတော့ မဆောင့်နဲ့အုံး ကိုလီးကအရမ်းကြီးတော့ ကြောက်တယ်
ကိုကလည်း ပပအဖုတ်ကွဲကိုပေါ့ ခုတောင်နာနေသေးတာ
အင်းပါ သူလည်းဖြေးဖြေးနဲ့အချက်၃၀လောက်ဆောင့်လိုက်အရှိန်ကတဖြေးဖြေးတင်လာတော့ ကျမလည်းသူ့ကျောပြင်ကိုကုတ်ချစ်မိတယ်
ကို ဆောင့် ဆောင့် ဟင်းးးးးးရှီးးး
ရော့ အင့် ဘွတ် ဘွတ်
ရတယ် နာပေမဲ့ ကောင်းနေပြီ ဆောင့်ဆောင့်
အင့် အင့် ဘွတ်
အားးးးကို ဆောင့်တော့ကွာ မညှာတော့နဲ့ အဖုတ်ကွဲချင်လည်းကွဲပါစေ ဆောင့်နော်
ရော့အင့် ဘွတ် အင့်ဟာ
အရမ်းဆောင့်ချပြီး သူ့လီးကအဆုံးထိအောင်ကပ်ထားပြီ ကျမအဖုတ်ကလည်း ပီးချင်နေတော့ သူ့လီးကြီးကိုညှုပ်စုပ်တယ်သူလည်း ပပအဖုတ်ထဲအရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် ကျမလည်းသူအရည်တွေပန်းချတော့ ကျမအဖုတ်ကလည်းအရည်တွေပန်းချမိတယ် သူလည်း ကျမအပေါ်ထပ်လျက်ကြီးပေါ့
သူလည်း ကျမ နှုတ်ခမ်းလေးစုပ်လိုက် နို့အုံကိုနယ်အသီးလေး ချေလိုက်နဲ့
အင်းသူက ပပလိုအချောလှလေးဆိုတော့ လိုးလို့မဝဘူး
အင်းပါ လိုးပါ သူလည်းကျမ ခြေထောက်၂ချောင်းကို ပခုန်းပေါ်ထမ်းပီးလိုးတာ
အားးးကို လီးကြီးက အရမ်းဝင်တာပဲ အချက်၅၀ထောက်ဆောင့်ပီးတော့ ၂ယောက်လုံးအတူပီးတယ် တနေကုန်နားလိုက်လိုးလိုက်နဲ့ ညနေကျမှပြန်ရတယ်သူကတော့ ၅ချည်ပီးကျမကတော့မမှတ်မိတော့ဘူး လူလညားပြိုင်းကျသွားတယ် အဖုတ်လည်းကျိန်းစပ်နေတယ် လမ်းတောင်မလျောက်နိုင်ဘူး ဆရာအခန်းမှာပဲရေမိုးချိုးပြီး ပြန်လာတယ် ကျမအခန်းပြန်ရောက်တော့ မောင်ကတော့မျှော်နေတာပေါ့ ကျမလည်း
မောင်ရယ် လက်မှတ်တွေအစုံထိုးခိုင်းရတော့ ပင်ပမ်းတယ်မောင်ရယ်
ပပ သံပုရာရည် ဖျော်လိုက်မယ်နော်
မောင်ဖျော်လာတဲ့သံပုရာရည် သောက်ပြီးအနားယူလိုက်တယ် အားဆေးလည်းသောက်လိုက်တယ်တမှေးလောက်အိပ်လိုက်တော့ လူလည်းလန်းသွားတယ် မောင်ကအနားလာပြီး နဖူးလေးသပ်ပေးလိုက် နှုတ်ခမ်းလေးစုပ်လိုက်နဲ့
အင်းပါ ကျမလည်း မောင့်စိတ်တိုင်းကျ ပေးလိုက်တယ်
ဒီလိုနဲ့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့လုပ်ကျတယ် မောင်ကတော့နေခဲ့တဲ့ကျောင်းနားမှာ မိတ္တူဆိုင်လေးဖွင့်တယ် ကျမကတော့ နောက်ပြောင်းရမဲ့ ကျောင်းကိုခရီးဆက်ရပီပေါ့ကျနော့မိန်းမ ရာထူးတိုးပြောင်းသွားတော့ ကျနော်က ကျောင်းနားလေးမှာ မိတ္တူဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ် ဆရာ ဆရာမ နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူမိတ်ကရှိထားတော့ မဆိုးပါဘူး ဆိုင်မှာက ငွေလွှဲငွေထုပ် ပါလုပ်ထားတော့ အဝင်အထွက် ရှိတယ်
ကျောင်းသူလေးတယောက်က သူ့အိမ်ကငွေလွှဲတိုင်း လာထုပ်လို့ ရင်းနှီးနေပီ စကားပြောရင်လက်ခလေး ပုတ်ပုတ်ပြီးစကားပြောတယ် မျက်လုံးကလည်းမခိုးတရို့နဲ့ တခါတလေ လိုအပ်ရင်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရတယ် သူတို့ကလည်း ဖုန်းနံပါတ်ယူတယ် ညရောက်တော့ ဖုန်းဆက်ပါလေးရော
ဦး က ညစာမစားဘူး သမီး
ဟင် ဦးက အရမ်းနောက်တယ် အိ ကို သတိရလား တဲ့
ဟင် အမလေး မြတ်စွာဘုရား အိရတနာ ဒီအဆင့်ထိတောင်ရောက်သွားပါ့လား မြန်လိုက်တဲ့ခေတ် ITခေတ် ကိုယ်စိတ်ထဲပဲ တွေးမိတာပါ ပါးစပ်ကတော့
သတိရတာပေါ့ အိက ဦးဆိုင်ဝင်ထွက်နေတော့ ထိပ်ဆုံးကသတိရတာ
တကယ်ပေါ့ မယုံရင်ထဲ ဝင်ကြည့် မောင်ဇော်တို့ စကားလုံးတွေထည့်လိုက်ပါပီ
ဘယ်လောက်ထိ သတိရတာ ပြမလို့ပါ
အဲလိုနဲ့ ညတိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်တယ် ကလိတိတိလေးတွေ ပြောဖြစ်တယ်
မိုးတွေရွာတဲ့ တနေ့မှာ ဆိုင်ရောက်လာတယ် မိုးရေ စိုတော့ ဆိုင်နောက်ခန်းခေါ်ပြီး အဝတ်စားပေးလိုက်တယ် အင်ကျီက ပွနေတော့ ခေါင်းစွတ်အနွေးထည်ပေးထားတယ် ခုတင်ပေါ်ထိုင်နေတယ် ကျနော်လည်း အပြင်ထွက်ပီး မိတ္တူစွဲ တယ်အားလုံးပီးတော့ အခန်းထဲပြန်လာတယ် သူလည်း ထိုင်နေတုန်းပဲ
အိ မိုးရွာ ထဲ ဘာလို့လာရတာလည်း
ဦး ကို သတိရ လို့ ပြောပီး ရင်ခွင်ထဲဝင်လာပါလေရော ကျနော်လည်း သူ့ကို ဖက်ထားမိတယ် နောက်ပီးကျနော် ရင်ဘတ်ကိုထုပါလေရော
ဘုန်း ဘုန်း ဘုန်း
သူများကို ချစ်တယ် လို့လည်း မပြောသေးဘူး
ကျနော်လည်း အိ နှုတ်ခမ်းလေး ကိုစုပ်လိုက်တယ်
လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ် သူလည်းမျက်တောင်စင်းပြီး ကျနော့ ကိုပြန်ဖက်တယ် အိက နဲနဲ ဝ တယ် ခါးတုတ်တယ် လူဝတော့ နို့လည်းကြီးတယ် အပေါ်ကပဲ ဖြစ်နယ်လိုက်တယ် အင်ကျီခံနေတော့ အောက်ကနေ အထက်တက်ပြီး ဘယာစီယာ အပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်တယ်
ဘယာစီယာဂျိတ် ဖြုတ်လိုက်တော့ နို့ကကြီးတော့ အရမ်းနယ်လိုက်တယ်
အော်တော့ နယ်တာလျော့ပြီး နို့သီးလေး တော်တော်ရှာရတယ် သေးသေးလေ အထဲပြန်ဝင်နေတာ နို့ကိုစို့ပေးပီး အဖုတ်ကို ပွတ်လိုက်တယ်
ဒါနဲ့ ဆိုင်တခါးသွားပိတ်ရတယ် ဘေးဘီကြည့်ပြီးတော့ သေချာပိတ်လိုက်တယ် ပြန်ဝင်လာတော့ အိ က ရှက်နေတယ် အိ ကို ဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းပြန်စုပ်လိုက်တယ် လက်က ဖင်တုံးကြီးကို ဆုပ်နယ်လိုက်တယ်
ကျနော်လည်း သူ့လက်ကိုင်ပြီး ကျနော် လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်
ကျနော်လည်း သူ့အဖုတ်ကို လက်နဲ့ ပွတ်ပေးလ်ုက်တယ် အရည်တွေကလည်း အရမ်းထွက်နေတော့ လက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တယ် စိနေတာပဲ သူ့အဖုတ်ကို မွှေလိုက်တယ် သူလည်းကော့တက်လာပီး
ကျနော်လည်း အရည်တွေ အရမ်းထွက်နေတော့ သူ့ပေါင်ကြား ဝင်ထိုင်လိုက်တယ် လီးကိုသေချာကိုင်ပီးတေ့ထားလိုက်တယ် ခါးကိုအသာလေး နှိမ့်ချလိုက်တယ်
ဗြိ ပြစ် တစ် တစ် ဗြိ
အားးးးး နာတယ် နာတယ်
ကျနော်လည်း ပြန်ထုပ်ပေးပီး နို့လေးတွေ နယ်လိုက်စို့လိုက်လုပ်ပေးတယ် နဲနဲထိုးလိုက်ပြန်ထုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်ယူရတယ် အမှေးပါးကခံနေတော့ သူ့ဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်လျိုပြီးပခုန်းသေချာ ကိုင်ထားတယ် နှုတ်ခမ်းကိုသေချာစုပ်ထားပြီး ဆောင့်ချလိုက်တယ်
ဗြိ ဘွတ် ဘွတ် ဒုတ်
အွန်းးး အားးးးး သူရုန်းတယ် သေချာချုပ်ထားတော့ ရုန်းလို့မရဘူးပေါ့၁၀ချက်လောက်ဆောင့်ပေးလိုက်တယ်
ကျနော်လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းကို လွှတ်ပေးလိုက်တယ်
ဟွန့် သူများကို နာအောင်လုပ်တယ် လူဆိုးကြီး
ချစ်လို့ပါ အိရယ် နော်
သွားပါ ဟွန့်အားးး နာတယ်လို့ လုပ်ပြန်ပီ ကျမလည်း ကိုကို ပခုန်းကို ကိုက်လိုက်တယ်
အားးးးး ခွေးမလေး ကိုက်တယ်
ကိုက်မှာပေါ့ အ အု အွန်း စကားကို ဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရဘူး အိနှုတ်ခမ်းကို စုပ်ထားတာဆိုတော့ ကျမလည်း ပြမ်စုပ်လိုက်တယ် ကြာတော့ကောင်းလာတယ် နို့ကိုလည်း နယ်တယ် အောက်ကလည်း ဆောင့်ချရင်းနဲ့ အဆုံးထိဝင်နေပြီ
ဘွတ် ဘွတ် ဖွတ် အားးးးး ကောင်းလာပီ ကိုကို
အင့် ရော့ အားးးးး
နောက်တော့ အရှိန်မြင့်ပီး ဆောင့်ချတယ် အထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ သေးပေါက်ချင်သလို ဖြစ်လာပီး ကိုကို့ဖက်ထားလိုက်တယ် တခုခုထွက်သွားသလိုပဲ ကိုကိုကလည်း ကျမကို အရမ်း ဖက်ထားပြီး ကျမစောက်ပတ်လေးထဲ အရည်တွေ ပန်းချလိုက်တယ နောက်တော့ကျမအပေါ်ပိကျလာတယ်
အင်း ဒါပေမဲ့ မောပါဘူး ချစ်ထာကို
အိ ကို ချစ်လား
မသိသေးဘူးလား သိအောင် ထပ်ပြရမှာပေါ့
ဟာ တော်ပီ လေကိုကို ပြောလို့လည်း မရဘူး အရမ်းဆိုးတာပဲ
ဘွတ် ရှီးးးးးး အားးးးး နာတယ် အဲဒီနေ့က ကိုကိုကနောက်ထပ်၂ချည်လောက်လိုးချပေးလိုက်တယ် ကျမရဲ့အပျိုစင် စောက်ပတ်လေးဟာ ကိုကိုလိုးခဲ့လို့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းလေးကွဲခဲ့တယ် အဆောင်ပြန်တော့ ပေါင်က ကွတ ကွတ နဲ့ပြန်ခဲ့ရတယ် အဆောင်ရောက်လို့ရေမိုးချိုးတော့ အဖုတ်ကိုသေချာဆေးပြီးသန့်စင်လိုက်တယ် အခန်းထဲရောက်တော့ ထဘီလှန်ပီး အဖုတ်ကို အရက်ပြန်ကို ဂွမ်းတို့ပြီး စောက်ပတ်ရဲ့ကွဲတဲ့နေရာကို ပွတ်လိုက်တော့
အမလေး စပ်လိုက်ထာ ဟူးးး
ကျမ အော်သံကြားတော့ အဆောင်ပိုင်ရှင် ဦးထွန်းအောင်က အခန်းထဲရောက်ချလာတယ် ဒီမှာကလည်း တိုးလို့တန်းလန်းကြီး ဝတ်ထားတာဆိုလို့ ထဘီရင်ရှားကြီး
အို အဘ ဘာလို့ ဝင်လာတာလည်း
သသမီး အ အ အော်သံ ကြားလို့
ထဘီကို ဆတ်ခနဲ ဖုံးလိုက်တော့ ရင်ရှားထားတာက ပြုတ်ကျပြန်ရော
(အို) ကျမရဲ့ နို့ ကသူ့ကို ဖော်ပြသလို ဖြစ်နေတယ် ကျမလည်း ထဘီကို ပြန်ပြီး ရင်ရှားလိုက်တယ်
အဘက အနားလာပြီး ကျမကို ဖက်လိုက်တယ် နောက်တော့ ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ်
ပြွတ် ကျမလည်းရုပ်တရက်ဆိုတော့ တွန်းမိတယ် သူက ရအောင်ချုပ်ထာပြီး ကျမနှုတ်ခမ်း ကို စုပ်ထားတောု့ငြိမ်နေမိတယ် နောက်သူ့လက်ကြီးက ကျမ နို့ကို လာကိုင်တယ် ကိုကို လိုးထားလို့အထုတ်လေးက နာတဲ့ကြားက အရည်တွေ ထွက်လာတယ် ခုနင်အတူလှဲချပြီး ထဘီစ ဖြုတ်ချလိုက်တော့ တင်းရင်းဖြူဖွေးနေတဲ့နို့ကို နယ်တယ် တင်းရင်းနေတော့ ဖြစ်ညစ်တာ အရမ်းကြမ်းတာပဲ
အားးးးး နာတယ် အရမ်းပဲ
နောက်တော့ ကျမရဲ့နို့ကို ကွမ်းစားထားတဲ့ ပါးစပ်ကြီးနဲ့ စို့တယ်
ပလွတ် ပြွတ် ပြွတ် အရမ်းစို့တော့ နို့သီးလေးတောင်ကြင်တက်သွားတာပဲ
ယားတယ် အဘ ဖြေးဖြေးစို့လေ
လက်ကြီးကလည်း နို့တွေ နယ်ရင်းနဲ့ အောက်ဆင်းလာတယ် ကျမရဲ့ အဖုတ်ကို ပွတ်နေတာ အရည်တွေကလည်း ထွက်နေတော့ သူ့ကို ဖက်ထားမိတယ်နောက်ခေါင်းကြီးက အောက်ဆင်းပီး အဖုတ်ကို သေချာကြည့်တယ် အရည်တွေလင်းလက်နေတော့ သူလျှာကြီးနဲ့ယက်တယ်
အားးးးး ရှီးးးးးး ဘာလို့ယက်တာလည်း
သမီးလေး ကောင်းအောင်လို့ ယက်ပေးတာ
အားးးးး ကောင်းလိုက်ထာ ယက်ယက် နောက်တော့အရမ်းကောင်းလာပြီး အဘခေါင်းကိုင်ပြီး ကော့ပေးမိတယ် မနေနိုင်တော့ဘူး ကျမစောက်ပတ်ထဲ က အရည်တွေပန်းချမိတယ် လူကြီးကထွက်လာတဲ့ အရည်တွေ မျိုချတယ် ကျမလည်း ကျမအရည်တွေကို မျိုချတာမြင်တော့ အဘိုးကြီးကို ခိုက်မိသွားတယ် ဒါနဲ့ပအပေါ်ပြန်တက်လာပြီး နို့လေးနယ်လိုက် နှုတ်ခမ်းလေး စုပ်လိုက်နဲ့ စိတ်က ပြန်ကြွလာတယ် နောက်တော့ သူ့ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တယ် နောက်ပြီးကျမလက်ကို ယူပြီး သူ့လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်
ဟင် အာကြီးကြီး ပဲ နောက်ကျမ ပေါင်ကြားဝင်ပီးတော့ သူ့လီးကြီးနဲ့ ကျမ စောက်ပတ်ကို တေ့တယ် နောက်ထိုးထည့်လိုက်တော့ မဆန့်တာနဲ့ အထက်ကို ချော်တက်ပြီး လီးထိပ်ကြီးက အစေ့လေးကို ထိုးဆောင့်မိတယ်
အားးးးး ရှီးးးးးး ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလည်း
သမီး အဖုတ်က သေးတာကို
သူလည်း လီးကို သေချာချိန်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်တယ်
ဗြစ် ပြစ် တစ် တစ် တစ်
အ အ အာ အားးးးး နာတယ်
အားးးးး နာတယ် နာတယ် ရှီးးးးးး
ကျမလည်း သူ့ရင်ဘတ်ကြီးကို ထုတယ် သူကလည်း တောင့်ခံထားပီး ကျမ စောက်ပတ်ကို ရအောင်ထိုးထည့်တယ်
ဗြိ ဘွတ် အင့်
အားးးးး ရှီးးးးးး နာတယ်လို့
အင့် ရော့ ဗြိ
အားးးးး သမီးကို မသနားတော့ဘူးလား
အင်းပါ အဘိုးကြီးလည်း ရပ်ထားပြီး နို့အုံကို ဆုတ်နယ်ပေးတယ် နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ပြီး လျှာထိုးသွင်းတော့ကျမလည်း သူ့လျှာကြီးပြန်စုပ်မိတယ် နာတာသက်သာလာတော့ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ဆောင့်တယ် ကျမခံနိုင်မှန်းသိတော့ အရှိန်တင်ပီးဆောင့်တယ်
ဖောင်းး ဖောင်းးး လီးကြီးက အဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်ဆွဲသွားလို့ကောင်းလာသလိုလို ဖြစ်ထာနဲ့ ကျအလည်း ပါးစပ်ကနေ
ဆောင့် ဆောင့် ကောင်းနေပြီ
ဒါဆို မြန်မယ်နော် ခလေး
သူလည်း တအားကျုံးဆောင့်တော့တယ် အိယာခင်းကို လက်နဲ့စုပ်ကိုင်ပီး ကော့ပေးမိတယ် အဘလည်း ကျမ ကိုဖက်ထာပြီး အဖုတ်ထဲ အရည်တွေကို တဖြောဖြောပန်ချတယ်နောက်တော့ ကျမအပေါ်ပိကျလာပြီး မှိန်းနေတယ် ကျမလည်းမှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ် တရေးနိုးလာတော့ သူရင်ခွင်ထဲမှာပေါ့ နောက်တော့သူလည်းနိုးလာပြီး နောက်ထပ်လုပ်ချင်သေးကြောင်ပူဆာတယ် ကျမလည်း
တော်ပီလေ သူများတွေ သိကုန်လိမ့်မယ်
မသိအောင် လုပ်မှာပါပြောပြီး ကျမကို ကုန်းခိုင်းတယ် ကျမလည်း ကုန်းပေးလိုက်တော့ နောက်ကနေ နေရာယူပြီးဆောင့်ချတယ် တော်နော်လည်း လိုးနိုင်တဲ့ အဘိုးကြီး သူက၂ချည်ပီးတယ်ကျမက ၅ချည်လောက်ပီးတယ် ဒါတောင်ဇွတ်ပြန်လွတ်ရတယ် ။
မနက်မိုးလင်းတော့ မထနိုင်ဘူး မိတ္တူဆိုင်က ကိုကိုက ဖုန်းခေါ်တယ်
ကိုယ်တွေလက်တွေနာနေလို့ နောက်ပြီး ဟိုဟာကလည်းနာနေတာ အိ အနားယူမလို့
ကျနော်လည်း မနေ့က ငါလုပ်ထာခလေးမလေးတော့ အီဆိမ့်သွားတာပဲ တွေးနေမိတယ်ဆရာမ တယောက်ရောက်လာတယ် ပရင့်ထုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့စတစ်လေးယူကာ ကွန်ပျူတာထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ် သူလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်တိုင်းသွားလိုက်တယ် အဲဒီအချိန် သူ့ဖုန်းကRing tone မြည်လာတော့ ဖုန်ပြောနေရင်းအရေးတကြီးထွက်ထားတယ် သူ့စတစ်လေးကို ပြန်ယူဖို့မေ့သွားတယ် ဒါနဲ့သူစတစ်ဝင်မွှေလိုက်တော့စတစ်ထဲမှာ စာအုပ်တွေ တွေ့တယ်ဗျ ဆရာ တွေက မောင်ကြီးစာအုပ်တွေရယ် နောက်ပီးမြသာ စူးစမ်း ကိုစည်ဒီဆရာမ အတွေးပင်လယ်နဲ့တိတ်တခိုးဝင်ကြည့်တယ် ထင်တယ် (မှတ်ချက်)စာရေးသူ စိတ်ကူးပါ ကျနော်လည်း သူ့စတစ်ထဲ စာအုပ်အသစ် ထည့်ထားလိုက် နောက်ပီး video ဇတ်ကားတကားထည့်ထားလိုက်တယ် ခနနေတော့ ဆရာမ ပြန်လာတယ် အသက်ကတော့ငယ်သေးတယ် ၃၀တောင်မပြည့်ချင်သေးဘူး PHDတော့ပြီးထားတယ် လက်ထောက်ကထိက. ဒေါက်တာမို့မို့ခင် တဲ့
ခနနေတော့ ပရင့်ထုပ်ပေးလိုက်ပီး ကျန်တဲ့အစုံကို မိတ္တူဆွဲပေးလိုကိတယ် ကျသင့်တဲ့ပိုက်ဆံချေတော့ ပိုက်ဆံက တစ်သောင်းတန်ပေးတော့အမ်းစရာကလည်း
ပိုက်ဆံမရှိ ဒါနဲ့ဆရာမလေးက သူ့ပိုက်ဆံပြန်ယူပြီး နောက်မှလာပေးမယ် လုပ်ပါရော ဒါနဲ့ စတစ်ကိုသေချာကြည့်ပီး သူ့လက်ဖဝါးလေးထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်
သူလည်း ရှက်တဲ့အမူရာလေးနဲ့ ပြနေတော့ ထွက်သွားတယ် ကျနော်လည်းလဘက်ကောင်းစားဖို့ စောင့်ရမယ်လေ ဒါနဲ့နောက်နေ့ကျတော့ မိုးလေးကစဲစဲရွာနေတယ် အိကလည်း ပရောဂျက်ရှိတော့မအားဘူးဖြစ်နေတယ် ဆရာမလေး ပြန်လာတယ် ပရင့်ထုပ်မယ်တဲ့ကျနော်လည်း သူစတစ်ကို ယူပြီးကွန်ပျူတာမှာထိုးထည့်လိုက်တယ် သူလည်းအနားကပ်ထိုင်တယ် ဘယ်ဖိုင်ထုပ်ရမှာကို ပြောကျနော်က ပရင့်ထုပ်
ညီမ စတစ်ထဲ ဘာတွေထည့်လိုက်ထာလည်း ဟွန့်
သွားပါ သူထည့်ချင်တာ လျောက်ထည့်ပီးမှ သူများဖိုင်တွေလျောက်ကြည့်တယ် ဆရာမ နဲ့ကိုတိုင်ပြောမယ်
မို့မို့ ကြောက်တယ် ကို
ကျနော်လည်း သူလက်ခလေးကိုင်လိုက်တယ် ဖြူဖြူနုနုလေးဆိုတော့ သူကရုန်းချင်ပေမဲ့ ရှက်တဲ့အမူရာကြောင့် ကျနော်လည်း သူ့ကိုဖက်လိုက်တယ်
ဟာ ကိုကလည်း လွတ်ကွာလူမြင်လိမ့်မယ်
ကျနော်လည်း မို့မို့ခင်ကို အခန်းဘက်ခေါ်သွားလိုက်တယ် အခန်းထဲရောက်တော့ သူနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်တယ် လက်ကအပေါ်ကပဲ သူ့နို့ဆုတ်နယ်လိုက်တယ်
နောက်တော့ ကျနော်ကပဲ ချွတ်တယ် ဘော်လီဂျိတ်လည်း ဖြုတ်ပီး နို့ကိုဆုပ်နယ်လိုက်ပီး ဒါရိုက်ကိုင်ရတော့ နူးညံ့လိုက်တာ တင်းနေတာပဲ နို့ကိုစို့လိုက်တယ် လက်ကအောက်ဆင်းပီး ထဘီအောက်ကနေ လက်လျိုပီးပင်တီပေါ်ကနေ စောက်ပတ်ကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ် ဆရာမလည်း ညီးသံထွက်လာတယ် နောက်တော့ ဘောင်းဘီထဲလက်ထည့်ပီး အစေ့လေးကို ချေပေးလိုက်တော့ ကော့တက်လာပီး
ကို မနေတပ်ဘူးကွာ တော်တော့
ကျနော်လည်း ဒီဆရာမ တော့ တော်တော်အထာကျနေပါ့လားလို့တွေးမိတယ် ဒါကြောင့်သူအပေါ်တက်မခွခင် သူ့လက်ခလေးကို ဆွဲကိုင်ပီးကျနော်လီးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်
ဟင် အကြီးကြီးပဲ ကို
ကို့ ဟာကို ပြောနေတာပေါ့
သူနဂိုအတိုင်းပါ မို့ ရယ် အရည်တွေလည်းထွက်နေတော့ ကျနော့လီးနဲ့မို့မို့စောက်ပတ်ကိုတေ့ပီး သွင်းချလိုက်တယ်
ပြစ် တစ် တစ် ဗြိ
ကျနော်လည်း ဒီလောက်ကြတ်မယ်မထင်ဘူး ခုတော့ပါကင်လေးပါ့လား ကုန်းဘူးတယ်ထင်နေတာ သေချာသိမ်းထားတဲ့အပျိုစင်လေးပါ့လား ဒီတော့ဖြေးဖြေးချင်းပဲလိုးပေးနေတာ အမှေးပါးလေးက ခံနေတော့ စိတ်ရှည်ရှည်စောင့်လိုးပေးနေရတယ်အချက်၃၀လောက်ညောင့်ပေးတော့ အရည်ကလည်းလိုက်လာတော့ ပြန်ဆွဲထုပ်ပီးအရမ်းဆောင့်ချလိုက်တယ်
ဒုတ် ဗြစ် ဘွတ်
သေပါပီ ကို ရယ် နာလိုက်တာ အရမ်းကိုပဲ
ဖြေးဖြေးချင်း ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်ပေးပြီး ခနလောက်ကြာတော့ ခံနိုင်လာတော့
ကျနော်လည်း အရှိန်မြင့်ပြီး လိုးလိုက်တယ်
အားးးးး ရှီး ကို ရယ် ကိုဟာကကြီးတော့ ကြတ်သတ်မေတာပဲ
ဟာ ကိုကလည်း နားရှက်စရာတွေ မသိဘူး
ကျနော် လည်း သူကောင်းမှန်းသိတော့ အရမ်းဆောင့်ချလိုက်တယ်
ဘွတ် အားးးးး ဖွတ် ဘွတ် အား အား
ဆောင့်ချတော့ နာလည်း အောင့်ခံတော့မယ်
ရော့ အင့် ရော့
အားးးး ကောင်းတယ် ကျမလည်း မရှက်နိုင်တော့ဘူး အဖုတ်ကခံလို့ကောင်းနေတော့ ကို့ ကို ဖက်ထားပြီးကော့ပေးလိုက်တယ် အဖုတ်ကွဲလည်းမတပ်နိုင်တော့ဘူး အရင်ကလက်နဲ့ဖြေဖျောက်ထာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်ကို ကောင်းတာကို သူကလည်း အရမ်းကိုဆောင့်ပေးတော့ အဖုန်က ကြင်တက်လာတယ်
ကို မို့ ပြီးတော့မယ် ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့်
ကျမလည်း ကို့ ကိုဖက်ပြီး အရည်တွေပန်းထုပ်တဲ့အချိန် ကို က နောက်ထပ်အချက်၃၀လောက်ထပ်ဆောင့်ပြီးကျမစောက်ပတ်ထဲကို သူ့အရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် ကျမစောက်ပတ်ကလည်းသူအရည်တွေထွက်ဖို့ လီးကိုညစ်ပေးလိုက်တယ် နောက်နော့ကျမအပေါ်ထက်လျက်ကြီး လီးကိုမထုပ်ပဲနဲ့ စိမ်ထားတယ်နောက်ကျမ နှုတ်ခမ်းလေးစုပ်လိုက် နို့ကို ဖြစ်နယ်လိုက် နို့သီးလေး ချေလိုက် စို့လိုက် သူ့လီးကြီးက ပြန်မာလာတယ် ကျမ ပိပိကလည်း အရည်ထွက်လာတော့
ကို့ ဟာကြီးက ပြန်ထလာပြန်ပြီ
ဟုတ်တယ် မို့လို လှတဲ့ဆရာမလေး ကို လိုးလို့မဝလို့လေ
ကို မြန်မြန်လုပ်ကွာ လူတွေသိအုံးမယ်
ကျမလည်း အဲဒီနေ့က ၂ခါလောက်အလိုးခံလိုက်တော့ ပိပိက ကျိန်းစပ်နေတယ် ပေါင်ကလည်းကွတကွတ နဲ့အဆောင်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။
ကျမ မို့မို့ခင်ပါ မိတ္တူဆိုင် က ပြန်လာတော့ အဖုတ်က ကျိန်းစပ်နေတယ် ပထမဆုံးအလိုးခံလိုက်ရတော့ နာမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ကိုယ်က လိုချင်မိတာကို အိမ်ပြန်အနားယူ တယ် မနက်ကျ အတန်းဝင်ဖို့အတွက်စာဖတ်ရတယ် ဖတ်ပီးလို့ အိပ်ပျော်သွားတယ် မနက်လင်းတော့ အတန်းဝင် စာသင်ချိန်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းအေမီ သူ့ဂျူတီအငှါးစောင့်ပေးရတယ် မနေ့က မိတ္တူဆိုင်မှာ အလိုးခံခဲ့ရလို့. အဖုတ်က ပြန်ယားလာတယ် စိတ်ကလည်း အရမ်းဖြစ်နေတယ် ညနေရောက်လို့ ပြန်မယ်ဆိုတော့ မိုးကရွာချပါလေရော ဖုန်းဝင်လာလို့ အေမီက ဌာနကစောင့်ဆိုတော့ စောင့်နေလိုက်တယ် သူတို့ကားနဲ့ရောက်လာတော့ သူတို့အတွဲရယ် နောက်ထပ်ဧည့်သည်တယောက်ပါလာတယ် အေမီ ရည်းစားရဲ့သူငယ်ချင်း အင်္ဂလန်ကတဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတယ် ကျမလက်ကို ကိုင်ရင်နဲ့လက်ဖဝါးထည့် သူတို့မမြင်အောင်ကလိထိုးလိုက်တယ်
ဟွန့် အရမ်းဆိုးတဲ့ လူကြီး အကြည့်လည်းရဲတယ် ညကျတော့ ညစာစားပွဲဧည့်ခံကျွေးမွေးချင်တယ်ဆိုလို့ အေမီတို့နဲ့ လိုက်သွားတယ် သူနမ်မည်က ဒေးဗစ် အတိုကောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်တယ် ကျမလည်း ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်လိုက်တယ် စကပ်ဒူးဖုံး အပေါ်ပိုင်းက ကိုယ်ကြတ် ဘယာအပျော့သား ကျမလည်းပြီးစီးတော့ ကားလေးနဲ့ရောက်လာတယ် အေမီ တို့စုံတွဲက နေရာယူထားတော့ ကျမက ဒေးဗစ်နဲ့အတူထိုင်ရတာပေါ့ ကားပေါ်မှာတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ သူက ကျမကိုအတိုကောက် ခင်လို့ခေါ်တာကို ခွင် အသံထွက်တယ် ကျမတိုကျောင်းကနေထွက်လာပြီးမန်လေးတောင်အရှေ့ဘက်ကနေပါတ်မောင်းလာတယ် ကျုံးအရှေ့ဘက်၆၆လမ်းအတိုင်းမောင်းလာတာပေါ့ ၂၆လမ်း ဆီဒိုးနား မီးပွိုင့်က ဆီဒိုးနားဟော်တယ်မှာ စားသောက်ကြတယ် သီးသန့်အခန်းမှာ ၄ယောက်အတူထိုင်စားသောက်ကြတယ် ထိုင်ခုံက လည်း၎ခုံဆိုတော့ ကျမက မစ္စတာဒေဗစ်နဲ့ကပ်လျက်ပေါ့ သူတို့က ဂျော်နီလမ်းလျောက်နဲ့မှာနယ်ကျမနဲ့အေမီကတော့ စပိုင်၁လုံးစီသောက်ကြတယ် အမြီးကတော့ ပင်လယ်စာနဲ့ အသားကင် စုံနေတာပဲ စကားတွေကလည်း စုံတယ် အင်္ဂလန်ကို အလယ်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ကျမလည်းအလိုက်ထိုက်တော့ပြန်ပြောပါတယ် အေမီကလည်း ဘေးတီးတပ်တယ် တွန်းပို့တယ်။
ဒါနဲ သူတို့ပြောဆိုနေတုန်းမှာပဲ ဒေးဗစ်ဘယ်လက်က ကျမ ပေါင်ကို လာပွတ်တယ် ကျမလည်း သူ့လက်ကိုထယ်တယ် သူကလည်း ဇွတ်ပဲ အေမီတို့ရိပ်မိမှာစိုးတာနဲ့ လက်လျော့မိတယ် နောက်တော့ စကပ်အောက်ကနေလက်ကတိုးတော့ ကျမလည်း ဖင်ကြွမိတယ်ပင်တီပေါ်ကနေ အဖုတ်ကိုလက်ချောင်းနဲ့ပွတ်ဆွဲတယ် ကြာတော့နေရထိုင်ရခက်ခဲတယ် ကျမလည်း မတ်တပ်ရပ်ပီး သန့်စင်ခန်းဘက်သွားလိုက်တယ် အားလုံးသတ်သတ်ရပ်ရပ်ပြင်ဆင်ပီးတော့ ပြန်ထွက်လာတယ် အေမီက ဒီမှာအနားယူမလားလို့မေးတော့ ကျမလည်းပြန်မဖြေတပ်ဘူး
မို့. မင်းကို မစ္စတာဒေးဗစ် က စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့
ကျမလည်း မူးရိတ်ရိတ်နဲ့ ဒေးဗစ်နဲ့ အခန်းထဲ ရောက်လာခဲ့တယ် စကားတွေကသိတ်မပြောဖြစ်ဘူး ခုတင်ပေါ်အတူထိုင်တော့ မျက်နာကိုသေချာကြည့်ပီး ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူတယ် ဖြေးဖြေးချင်းစုပ်ထာကနေ အရမ်းစုပ်တယ် လက်က ရင်ဘတ်ပေါ်က နေ ဆုပ်ကိုင်တယ် ကျမလည်း သူ့လက်အပေါ်ကနေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် အပေါ်အင်ကျီကို ချွတ်မယ်လုပ်တော့ ကျမကပဲ ချွတ်ပေးလိုက်တယ် နောက်စကပ်ကိုပါချွတ်လိုက်တော့ ဘယာစီယာနဲ့ ပင်တီပဲကျန်တော့တယ် သူလည်းအားလုံးချွတ်တယ်ဘောင်းဘီတိုတခုပဲကျန်တယ် ကျမလည်း မကြည့်ပဲ ခုနင်လှဲမိတယ် နောက်ကျမအနားကပ်လာပြီးဘေးကနေဝင်လှဲပီး ကျမလက်မောင်းကိုကိုင်ပီး ဆွဲဖက်ပြီး ကျမနှုတ်ခမ်းကိုလာနမ်းတယ်
အရမ်းလှတယ် လို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် နောက်တော့ဘယာစီယာ ဂျိတ်ဖြုတ်လိုက်တယ် ကျွတ်လည်းသွားရော ဝင်းဝါနေတဲ့ကျမရဲ့နို့ကိုပွတ်သတ်ဆုပ်နယ်တယ် ကျမလည်းရှိန်းဖိန်းသွားတယ် နောက်တော့ ကျမနို့ ကိုစို့တယ်
ပြွတ် ပလွတ် ပလပ်
အို အင်း ဟင်းးး
တဖက်ကိုနယ် တဖက်ကိုစို့ တယ် နောက်တဖက်ကိုပြောင်းစို့ရင်ကျန်ခဲ့တဲ့တဖက်ကို နယ်တယ် ၂ဖက်လုံးစို့လို့ ဝရင် ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းတယ် တကယ်တော့ မစ္စတာ ဒေးဗစ်လုပ်ပေးတာဟာ အရမ်းကောင်းတယ် ဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတာလေ. နှုတ်ခမ်းစုပ်ပြီး နို့ပြန်စို့တယ် နို့စို့ပြီးတော့ ဗိုက်သားတွေလျှာနဲ့ တို့တယ် ယက်တယ် ချက်ပေါက်လေးထဲလျှာနဲ့ထိုးယက်တယ် အောက်ဆင်းတော့ ပေါင်သားတွေကို ယက်တယ် ပေါင်ကြားယက်တယ်စောက်ပတ် ကိုတော့မယက်ဘူး ပေါင်ကနေအောက်ဆင်းတော့ ခြေသလုံးနမ်းတယ် ခြေဖမိုးနမ်းတယ် ခြေဖဝါးကြတော့လျှာနဲ့ယက်တယ် နောက်ခြေမ လေးကိုစုပ်တယ်
အို ဒီလောက်ထိ လုပ်ပေးမယ်လို့ မထင်ဘူးရှင် မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင် ကျမခိုက်မိတယ် ကျမခြေဖဝါးယားကျိကျိနဲ့ခြေဖဝါး၂ဖက်လုံးယက်မိတော့အပေါ်ပြန်တက်လာပြီးပေါင်တွေယက်တယ် ဒီတခါတော့ ပေါင်ယက်ပြီးတော့ ကျမရဲ့စောက်ပတ်ကို နှာခေါင်းနဲ့နမ်းတယ် နောက်တော့ သူလျှာနဲ့ယက်တော့တာပဲ ပေါင်၂ဖက်ကို သေချာကိုင်ပီးယက်တယ်
အားးးးး အားးးး ရှီးးးးးး အားးးး
ကျမလည်း ကောင်းလွန်းမိတော့ငြီးမိတယ် နောက်ပီးသူက မြန်မာ မဟုတ်တော့လွတ်သွားတာလည်းပါတာပေါ့ သူက ကျမ ရဲ့အစေ့လေးကို စုပ်ချလိုက်တော့ တွန့်လိမ်ပြီး သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး ပီးလိုက်မိတယ် ထွက်ကျလာတယ် သူ့ပါးစပ်မှာ ပေပွနေတာကို အနီးရှိတဲ့ အဝတ်နဲ့ သုတ်တယ် ခနနေတော့ ကျမ မျက်နာနားလာရပ်ပြီး သူဟာကြီးကိုင်ပြီး ပါးစပ်နားလာတေ့ထားနော့ ကျမလည်း အံ့သြမိတယ်
(အို) လို့ ယောင်ပြီးရွတ်မိတော့ ကျမ ပါးစပ်ဟသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဟာကြီးက ကျမပါးစပ်ထဲတိုးဝင်လာခဲ့တယ်
အွန်း အ အာ အု
ကျမလည်း ယောင်ရမ်းပြီး စုပ်မိတယ် သူလည်း ခံစားမှုဝင်လာတော့ ကျမခေါင်းကိုင်ပြီး ရှေ့ကို ဇွတ်ထိုးချတယ် သူ့ဟာကြီးက ကျမ အာခေါင်ကို ထောက်မိတော့
အဟွတ် အဟွတ် အဟွတ် သူ့ဟာကို ဇွတ်နောက်ဆုပ်ပြီးချောင်းဆိုးသီးမှ သူလည်းနောက်ဆုပ်တယ် တကယ်ပဲ သူ့ဟာကြီးက ရှည်သလို တုတ်လည်း တုတ်တယ် အကြီးကြီးပဲ ကြီးတယ်ဆိုတာကလည်း ကို နဲ့ လိုးခဲ့ဘူးလို့ သူ့ဟာကြီးမှန်းသိတာ နောက်တော့ ကျမပေါင်းကြားဝင်ပီး သူဟာကြီးနဲ့ ပွတ်ဆွဲတယ်ကျမအဖုတ်ကလည်း ပြန်ပြီးအရည်တွေထွက်လာတယ် ရင်တွေကလည်း တလှပ်လှပ်နဲ့သူထည့်လာမှာကို မျှော်မိတယ်
အားးးး အားးးးး သေပီ
မပြောမဆိုနဲ့ ထည့်လိုက်ထာ ကျမလည်း သူရင်ဘတ်ကြီးကို တွန်းထားမိတယ် သူလည်းစလိုးတုန်ကတော့မပြောမဆိုထည့်တာ ထည့်တာကတော့ ဖြေးဖြေးထည့်တာ တာပဲ သူ့လီးကကြီးတော့ အော်မိတာပေါ့ သူကနားမလည်ပေမဲ့ ကျမမျက်နာရှုံ့မဲ့နေတော့ ဖြေးဖြေးချင်းလိုးပေးတာပဲ ကျမလက်က သူ့ကို တွန်းထားတော့တဝက်ပဲ ဝင်တာကို သူပြောမှသိတာ ဝင်သလောက်နဲ့ ညောင့်နေရင်းကျမ ရဲ့နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ် ကျမလည်း သူ့လက်မောင်းက်ုကိုင်ပြီး ပြမ်စုပ်လိုက်တယ် သူက နို့ကိုင်တယ်ပွတ်တယ် နောက်ပီးထပ်သွင်းလိုက်တယ်
အားးးး အားးးး ရှီးးးးးး သူလည်းအရမ်းမြန်လာတယ် ကျမလည်းကော့တက်ပီး နောက်တကြိမ်ထက်ပီးတယ် သူလည်း အဆုံးထိမြုတ်ထားပြီး ကျမစောက်ပတ်ထဲ ပန်းချတယ် နောက်တော့ကျမပေါ်ထပ်ကြလာတယ် ကျမလည်း သူ့ကိုပြန်ဖက်ထားမိတယ်
အရမ်းကောင်းတယ် ခင် လို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်
ကျမလည်း တူတူပဲလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ခနလောက်သူ့ရင်ခွင်ထဲ အိပ်ပျော်သွားတယ် တရေးနိုးတော့ သူ ကျမကို လိုးတယ် အရမ်းလိုးနိုင်တာပဲ တကယ်ပဲ အဲဒီနေ့ကတညလုံးလိုလို လုပ်ခဲ့ကြတယ် သူက ၅ခါလုပ်ပေမဲ့ ကျမကတော့ပီးတာမရေနိုင်တော့ဘူး မနက်ကျတော့ လူကိုနုန်းချိသွားတယ် ပေါင်လည်းကွတကွန နဲ့ အဆောင်အခန်းပြန်ရောက်တော့ အတန်းဝင်ဖို့ မရှိတာနဲ့အိပ်လိုက်တယ် ၁၀နာရီလောက်ကျနိုးတယ် ဌာန က ဖုန်းဆက်တယ် ရာထူးတိုး အပြောင်းဆက်တော့ ပျော်မိတာပေါ့တပါအတွင်း ဆိုတော့ပစ္စည်းက မများပါဘူးတကိုယ်ရေပဲလေ မိတ္တူတိုင်က ကို့ ကိုတော့ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ် သူကလည်း ဝမ်းသာဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ် ဒီလိုနဲ့ပဲ မန်းလေးကနေ ကျမတက်ရမဲ့ နယ်မြို့လေးကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ မို့မို့ခင် ဖုန်းဆက်တော့ သူ့အတွက်ဝမ်းသာပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ စားပေါက်တခုလွတ်သွားတာပေါ့ မိန်းမ ကို သတိရ လို့ဖုန်းဆက်တော့ သူကလည်း သတိရကြောင်း အတူနေချင်းကြောင်း ပြောကြတယ်
အော် မောင့်ကို ပြောရအုံးမယ် ပပတို့ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ဆရာမ တယောက်နဲ့အတူနေရတယ် သူက သူအကြောင်းတွေပြောပြတယ် သူက ဒေါက်တာ မို့မို့ခင်
ကျမ ပပမင်း အကြောင်းဆက်ပြောပါ့မယ် ကျမ ရာထူးတိုအပြောင်းရွှေ့နောက်ပိုင်းမှာ နယ်မြို့လေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ် နောက်ရောက်တဲ့ကျောင်းမှာ ရီပေါ့တင်ရပါတယ် ဝင်ခွင့်ရပီးတဲ့နောက် လိုင်းခန်းမရလို့ ကျောင်းနားကအပြင်မှာ ငှါးနေရပါတယ် ကျောင်းက မြို့ပြင်မှာ ဆောက်ထားတော့ အဲနားကရွာမှာ နေရတာပေါ့ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေက သဘောကောင်းကျပါတယ် သူတို့မှာ သား၂ယောက်ရှိတယ် အကြီးတယောက်က မနက်ဆို ပြန်လာပီး ညဆို အလုပ်ဆင်းရပါတယ် အငယ်တယောက်က ကျောင်းသား ဆိုတော့ ကျောင်းတက်ရပါတယ် သူတို့ညီကို၂ယောက်က အဝင်အထွက်ပဲဆုံကြပါတယ် စနေတနင်္ဂနွေ ဆို အငယ်က လျောက်လယ်ပီး အကြီးကတော့ အိမ်နေပါတယ် ကျမက စာသင်ချိန်ပြီးရင် ကျမနေတဲ့ အိမ်ပြန်လာရင် အကြီးနဲ့ဆုံရပါတယ် အငယ်က ကျောင်းကပြန်လာရင် ညပိုင်းမှာဆုံရပါတယ် စာမသိလို့မေးရင် ရှင်းပြရပါတယ် ကျမကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအင်ကျီဝတ်ထားရင် လူကိုသိတ်မကြည့်ပဲခေါင်းငုံ့ထာပီး ရင်ဘတ်ကို ကြည့်တယ် ကျမလည်းမသိသလို နေပီးစာသင်ပေးရပါတယ် ပြီးရင်တော့ အခန်းထဲဝင်ပီးအိပ်တယ် ကျမလည်းယောက်ျားနဲ့ဝေးနေရတော့ ဆာတာပေါ့ရှင် သူမိဘတွေက အောက်ထပ်မှာအိပ်တယ် ကောင်လေးကတော့အပေါ်ထပ်မှာ ကျောင်းနမ်မည်က ကျော်မြင့် ကြီးတဲ့သူ ကျော်တင့် သူကအလုပ်ကပြန်လာရင်အငယ်ကောင်လေးက ကျောင်သွားဖို့ထွက်သွားရတယ် ကျမစာသင်ချိန်က ၁၁နာရီဆိုတော့အားတာပေါ့ အဲဒီတော့ ကျော်တင့်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ် ကျောင်းမသွားခင်ဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်စားပဲဝတ်တယ် ခက်ထာက သူကလည်း ရင်ဘတ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်တယ် ရေချိုးရင်လည်း မျက်လုံးက ကျွတ်ကျမတပ်ကြည့်တယ် စိတ်ထဲကလည်း တမျိုးကြီးခံစားရတယ် ။
ကျနော်က ကျော်တင့်ပါ ကျနော်တို့ အိမ်ဆရာမလေး ရောက်လာကထဲက အို အရမ်းလှပါ့လား လို့ မှတ်ချက်ချမိတယ် အသားလေးက ဖွေးဖွေးလေး အရပ်ကလည်း မနိမ့်မမြင့် ရင်အုံက မို့မို့ တင်က ကားကား ခါးလေးကသေးသေးဘယ်သူတွေတော့ မသိဘူး ကျနော်မျက်စိထဲမှာတော့ အရမ်းလှတယ် မိုးပေါ်က နတ်သမီးလေးလား အောင်းမေ့ရတယ် ထိရက်စရာမရှိဘူး ဆရာမလေး နဲ့စကားပြောရင်ပျော်သလိုပဲ ရင်ထဲမှာလည်း မောသလိုလိုကြီး ကျနော်လည်းအိမ်ပေါ်တက်ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်တယ် ဆရာမလေးလည်း ကျနော်မရှိဘူးထင်တော့ ထဘီထဲလက်ထည့်ပြီး ပွတ်သတ်နေတယ် အောက်က ညီတော်မောင်က ခေါင်းထောင်တာပေါ့ ရေချိုးပြီးတော့ အိမ်ပေါ်တက်လာတော့ ချောင်းတာရပ်ပြီး အခန်းထဲဝင်ပြီး အိပ်နေလိုက်တယ် ဟောက်သံပေးလိုက်တော့ ဆရာမလေး အိပ်ပျော်တယ်ထင်အောင်လို့ပေါ့ သနပ်ခါးသွေးသံကြားတော့မှ အသာပြန်ထပြီး ထရံပေါက်ကနေချောင်းလိုက်တယ် ဘေးတစောင်းပေမဲ့ရှေ့ကလည်းမျက်နာကိုမြင်ရတယ် သနပ်ခါးသွေးတော့ လုံချည်ထဲက သူနို့လှုပ်စိလှုပ်စိပေါ့ နောက်သနပ်ခါးလိမ်းတယ် လိမ်းတာပြီးစီးတော့ အဝတ်လည်းတော့မယ်ဆိုတော့ ဘယာစီယာကို ရှေ့ကနေ ဂျိတ်ချိတ်တယ် နောက်တပါတ်လှည့်လိုက်တယ် နောက်ဝတ်ပီး ထဘီကိုအောက်ဆွဲချတယ် လှလိုက်ထာဗျာ ကျနော့် လီးကလည်း အစွမ်းကုန်တင်းနေတော့တာပဲ နောက်ထဘီကိုလည်းတယ် နောက်တော့ အပေါ်ကခါးတို ရင်ဖုံးဝတ်တယ် မှန်ရှေ့မှာ ဆံပင်ကိုဆံထုံး ထုန်းပီးတော့ အပြင်ထွက်ဖို့လုပ်တော့ ကျနော်လည်း အိပ်ယာထဲ ပြန်လှဲပီး အိပ်ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ရင်းနဲ့တကယ်ပဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
ကျနော် ကျော်မြင့်က မနက်ပိုင်းကျောင်းတက်ရတယ် ညပိုင်းဆို နားမလည်းခဲ့တဲ့စာတချို့ ကို အိမ်မှာနေတဲ့ ဆရာမလေး ကိုမေးတယ် မျက်နာခြင်းဆိုင်မဟုတ်တော့ဘေးတစောင်းအနေထားပေါ့ ဆရာမ က ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတ်ထားနော့လည်ပင်းက ဟိုက်နေတာပေါ့ ကျနော်လည်း ကြည့်မိတယ် ဘယာစီယာထဲကနေလျံထွက်လာတော့ အာခေါင်ချောက်သလိုလို စားပွဲခုံအောက်က ကျနော့်ညီတော်မောင် ကို ဆုပ်နယ်မိတယ် စာတွေကနားထဲမဝင်ချင်ဘူး စိတ်က ဆရာမ နို့စီရောက်နေတာပေါ့ ဆရာမ ရဲ့မျက်လုံးကျနော်ဘက်လှည့်လိုက်တော့ ကျနောလည်းမရှောင်နိုင်ပဲ မျက်လုံးခြင်းဆုံမိကျတယ်
ဟင် မောင်ကျော်မြင့် စာရှင်းပြတာမကြည့်ပဲ မင်းးမင်းးဘာကြည့်တာလည်း
ဟို ဟို ဆ..ရာမ လှ..လှလို့ကြည့်မိတာ ဆ.ဆရာ.မ
ကျမလည်း စကားတွေ သူပြောသလို ထစ်နေမိတယ်ရှင်
ဆရာမ နို့ က အရမ်းလှတယ်
မင်းမိုက်ရိုင်းလှပါ့လား ကိုယ်ကို့ သင်ပြပေးတာကို ဒီလိုပြောရသလား တော်ပီ
ကျမလည်း သူ့ကို ရိုက်မိလိုက်ထာ မှားသွားသလားပေါ့ မတ်တပ်ထပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ် နောက်နေသူပြောသံမကြားတချက်ပေါ့
ကျနော်လည်း ပြောပြီးမှ မှားသွားမှန်းသိတယ် တောင်းပန်စကားတော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ် တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး လည်ဟိုက်ကြားက နို့ပြန်မြင်လာရင် လီးကတောင်လာလိုက် ဆရာမက အပစ်ဆိုလာရင် ပြန်ကျသွားလိုက် နေက်တော့တကယ်ပဲအိပ်ပျော်သွားတယ် မနက်ကျမျက်နာချင်း ဆိုင်ရမှာစိုးစောစောပဲကျောင်းသွားလိုက်တယ်။
ကျမလည်း မနက်ကျ ကျော်မြင့်စောစောထွက်သွားတော့ အိမ်မှာတျယာက်ထဲပေါ့ မကြာပါဘူး ကိုကျော်တင့်ပြန်လာတယ် ညက ကိစ္စကိုလည်း မသိလိုက်ဘာသာနေလိုက်တယ် ကျော်တင့်အခန်ထဲဝင်အိပ်လိုက်တော့ ကျမလာည်းရေချိုးမလို့ လုပ်တော့အခန်းထဲဝင်ပြီး အဝတ်စားချွတ်တယ်ဘယာစီယာဂျိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်တယ် နို့ကဘယာစီယာထဲက ရုန်းကန်ထွက်ချင်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့ ကျွတ်လည်းသွားရော တင်းရင်းနေတဲ့ ကျမရဲ့နို့က လှနေတာပဲ နို့သီးလေးက ဆူထွက်နေတော့ ညက ကျော်မြင့်ကို ပေးကိုင်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး နောင်တရသလိုလို ပိပိကလည်း အရည်တွေ စိမ့်လာတယ် နောက်ထရံဘက်က ဒုန်း ကနဲကြားလိုက်တယ်
အားးးးး ဆရာမ ရယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တယ့်ကျမလည်း ဟင် ကနဲဖြစ်ပြီး ထဘီကို ရင်ရှားလိုက်တယ် အခန်းအဝင်အထွက်ဘက်ကို ကျောပေးလိုက်တယ် ကျော်တင့်က ကကျမအဝတ်စားလည်းတာချောင်းကြည့်နေတာပါ့လား ရှက်လည်းရှက်တယ် မောင်နဲ့ မနေရတာလည်းကြာတော့ ဆာနေမိတယ် အဲဒိအချိန်မှာပဲ
ဟင် မောင်ကျော်မြင့် အခန်းထဲဘာလာလုပ်ထာလည်း
ကျနော် ဆရာမ ကို ချစ်တယ် ပြောပြီး ကျမကိုဖက်ထားပါလေရော နောက်ကျမနှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ်
မလုပ်နဲ့ အွန်း အု အွန်း
သူက ကျမနှုတ်ခမ်းတခုလုံး ကိုငုံထားတာလေ နောက်ကျမ ရဲ့ထဘီပေါ်ကသူ့အချောင်းကြီး က လာထောက်ထားတော့ ပိပိက အရည်တွေပိုစိမ့်တာပေါ့ နောင်တော့ကျော်တင့်လက်ကြီးက ကျမ နို့ကို ကိုင်တယ် ရင်တွေကလည်းခုန်တယ် နောက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ထာကိုခွာလိုက်တော့
ဟွန့် အရမ်းစုပ်ထာပဲ နောက်ပီးလက်ကြီးကလည်း တကယ်ပဲ
အဲဒါ ဆရာမ ကိုချစ်လို့ပေါ့
ပြောရင်းနဲ့ ကျမ ကို ခုတင်ပေါ်အတူထိုင်ပြီး ထဘီပါတ်ထားတာကိုဖြည်လိုက်တယ်
အို ဟင် ကျမလည်း မျက်လုံးမှိတ်ထားမိတယ် သူက ကျမရဲ့နို့ကိုသေချာကြည့်ပြီး
လှလိုက်ထာ ဆရာမ ရယ်လို့ပြောပြီး ကိုင်တော့တာပဲနောက်တော့ အိပ်ယာပေါ်လှဲချပြီး ကျမရဲ့ညာဘက်နို့ကိုစို့တော့တာပဲ အရမ်းစို့တော့ နို့သီးလေးက ကျင်သွားတာပဲ
အားးးးး ရှီးးးးးး အင်းးးးးး ဖြေးဖြေး
ပလွတ် ပြွတ် ပြွတ်
တကယ်ပဲ ရှင် နို့ဆာတဲ့ခလေးထက်တောင် ဆိုးသေးတယ် နို့တွေများဖြစ်ညစ်လိုက်ထာအစိလေးတောင်ကြေလောက်တယ် နောက်တဖက်ကို ပြောင်းစို့တော့ အရင်တဖက်ကို နယ်တယ် နို့စို့တာဝတော့ ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်တယ် ဒီကောင်လေးကြည့်ရတာ ရည်းစားတောင်မထားဖူးဘူးထင်တယ် စုပ်လိုက်ထာအသက်ရှူလို့ကြတ်လာတယ် သူရင်ဘတ်ကြီးကို ပုတ်ထုပ်မှ ခွာပေးတယ်
ဟွန့် အရမ်းစုပ်ထာပဲ သူများနှုတ်ခမ်းတောင် ပူထူနေပီ
နှုတ်ခမ်းလေးက စုပ်လို့ကောင်းတာကို စုပ်အုံးမယ်ကွာ
ဟာ အ အွန်း အု
စုပ်ပြန်ပီရှင် တကယ်ပဲ ဒီတခါစုပ်ရင်းနဲ့ ကျမပါးစပ်ထဲကို သူ့လျှာကြီးထိုးထည့်တယ် ကျမ လည်းမှိန်းနေရင်းနဲ့ သူ့လျှာကိုကျမလျှာနဲ့ ပြန်တွန်းတယ် သူကလည်းဇွတ်ပဲပြန်တွန်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမကပဲအလျော့ပေးလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ ကျမကပဲ သူ့လျှာကိုငုံပီးစုပ်မိလိုက်တယ် လက်ကလည်းသူ့ကျောကို ဖက်ထားမိတယ်သူ့လျှာကိုငုံထားရင်းက စုပ်လိုက်တယိ အခန်းထဲမှာ လျှာခြင်းစုပ်သံတွေ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ပေါ့ ကျမလည်း ဘယ်လိုဖြစ်မိမှန်းမသိဘူး ထဘီအပေါ်ကနေလက်က အတွင်းထဲဝင်ပြီး ကျမရဲ့ထဘီအပေါ်ကနေ အဖုတ်ကိုပွတ်လိုက်တော့ ကျမလည်းယောင်ပီး
ဟင် အဲဒါတော့ မလုပ်နဲ့ကွာ
ချစ်ချင်လို့ပါ မ ရယ်
ပြောလို့တော့ပြောနေရတာ ကျမအဖုတ်က အရည်တွေ ပို့စိမ့်နေပီ သူကလည်း ကျမ စိတ်ပါတာကိုသိနေတော့ထဘီအတွင်းထဲလက်နှိုက်ပြီး အဖုတ်ကိုဒါရိုက်ထိကိုင်တယ် တကယ်တော့သူက နှိုက်ချင်လို့တာနှိုက်နေတာကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ကောင်းတာပဲရှင် အရည်တွေကလည်း ထွက်နေတော့ ကျမ လည်းငြီးမိတယ်နောက်တော့ကျမ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့စောက်ပတ်အဝကိုတေ့ပြီးသွင်းတယ်
ဗြစ် ဗြစ်ဖွတ် ရှူးး
အားးးး ရှီးးးးးး နာတယ် နာတယ်
ဒီလောက်အော်နေတာ မဝင်ပဲနေပါ့မလား သူ့ဟာကြီးက တကယ်ပဲ
အားးးးး နာတယ်လို့ အရမ်းပဲကွာ
သူလည်းလိုးတာကို ခနရပ်ထားတယ် ပြီးတော့ကျမ မျက်နာကိုသေချာကြည့်တယ်
မ က အရမ်းလှလို့ နောက်ပြီးတော့
သူကစကားကို ရပ်ထားတော့ ကျမကပဲ
မ အဖုတ်က အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတယ်
မသွားဘူးဗျာ ကဲရော့ အင့်
ဖွတ် ဘွတ် ဘွတ်
အားးးးး ရှီးးးးးး အိုးးး
သူကဆောင့်ချတော့ သူ့ကျောပြင်ကို ဖက်ထားမိတယ် သူကကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တော့ ကျမလည်း ပြန်စုပ်လိုက်တယ်
ပြွတ် ပလွတ် ပလွတ်
ချစ်တယ် မ ရယ် ပြောပီးကျမ နို့ကို ဆုပ်နယ်တယ် အောက်ကလည်း အလိုးမပျက်ဘူး
ကျမ ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလည်း တကယ်တော့ကျမ မှာယောက်ျားရှိတယ်လေ ချစ်လို့ယူထားတာလေ ကျော်တင့်လိုးတာကလည်း အရမ်းကောင်းတယ်လေ
တို့က အပျိုမဟုတ်ဘူးနော် ယောက်ျားရှိတယ်
ဘာဖြစ်လည်း ယောက်ျားရှိတော့ မချစ်ရဘူးလား
နောက်ဆုံးတော့ ကျမကပဲကျော်တင့် နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ် ချစ်တာထက်သာယာမှုကို လိုချင်တယ်လေ
ချစ်တယ် လို့ သွားရှက်တယ်
မရှက်ပါနဲ့ မ ရယ် လိုးတောင်လိုးနေကြပြီပဲ
ဟာ နားရှက်စရာတွေကွာ ဘာတွေပြောနေတာလည်း
ချစ်မိလို့ လိုးမိတာပါ မရတော့ဘူး မ
အင့် အင့် အင့်
ဗြိ ဖွတ် ဖွတ်
အားးးးး အားးးး နာတယ် နာတယ် မောင်
အား အားးးးး အချက်ပေါင်း၆၀လောက်ဆောင့်ခံလိုက်ရတော့ ကောင်းလာတယ်လေ ကော့ပေးမိတယ် နောက်တော့ ဘေးက အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ကိုင်ပီးကော့ပေးမိတယ် သူကလည်း ဆောင့် ကျမကလည်း ကော့ ဆုံမိတဲ့အချိန်ဆို လီးကအရမ်းကို ကောင်းတယ် နောက်တော့ကျမ ကော့ပေးရင်းနဲ့ သူ့ကိုဖက်ပီး
မောင် ဆောင့် ဆောင့်
အားးးးရှီးး အင်းး ရှီးးးးးး
မောင် မ ပီးတော့မယ် အားးးးးပီးပီ
ကျမလည်းကော့ကန်ပီး အရည်တွေပန်းထွက်မိတယ် နောက်ထပ်သူလည်းအချက်၃၀လောက်ဆောင့်ပီးကျမစောက်ပတ်ထဲအရည်တွေပန်းချတယ်နောက်ကျမဘေးမှာလှဲအိပ်တယ်
ရပါတယ် မ ရယ်
မောင် မ အတန်းဝင်ရအုံးမယ် ခုရေချိုးမယ် နောက်မှဆုံမယ် ကျမလည်း ပြောပြီး မောင်ကျော်တင့်က ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ်
‌ကျမလည်း ရေချိုးပြီး ကျောင်းဘက်ထွက်ခဲ့တယ် အတန်းဝင်ပြီးတော့ မနက်က ကျော်တင့်လိုးလိုက်တာ အဖုတ်ကိုခုထိကျိန်းနေတုန်းပဲ ညပိုင်းရောက်ရင် ကျော်မြင့်နဲ့ဆုံရအုံးမယ်လေ ခုတော့အိမ်ပြန်ပြီး အိမ်ရှင်ဦးလေးကြီးစကားလက်ဆုံပြောဖြစ်တယ်အောက်ထပ်မှာဆိုတော့ ကျော်မြင့်ကို မမြင်ဘူး အိမ်ရှင်ဦးလေးကြီးကလည်း အကြည့်ရဲ နို့ကြည့်လိုက် ဖင်ကြည့်လိုက်နဲ့ကျမလည်း အိမ်ပေါ်တက်လာတယ် အိမ်ပေါ်ရောကိတော့ ကျော်မြင့်နဲ့ဆုံတယ် သူလည်းမျက်နာပူပူနဲ့ တောင်းပန်ရှာတယ် ညကျတော့ထုံဆန်အတိုင်းစာပြပေးရတာပါပဲလေ ကျမလည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်ထားတော့ သူမျက်လုံးက ကျမနို့ကိုကြည့်တာပါပဲကျမလည်း မသိချင်ရောင်ဆောင်ပြီး နေတာပဲ တကယ်တော့ကျမလည်း ရင်ခုန်နေတာပဲ မနက်က အကိုနဲ့ဖြစ်ပီး ခုညမှာဆက်ဖြစ်အုံးမှာလား အရေးထဲအဖုတ်က ဆစ်ခနဲဖြစ်ပြီး တမျိုးကြိးပဲ ရှင်
ကျနော် ကျော်မြင့် ဆရာမ ကို စိတ်ထိမ်းပြီးနေထိုင်တာကိုပြောပေမဲ့ တကယ်အနီးကပ်တွေ့တော့ ရင်တွေခုန်တယ် နို့ကလည် လယ်ပင်းကနေ ဟိုက်နေတာမြင်ရတော့ အောက်ကညီတော်မောင်က ခေါင်းထောင်လာတာပေါ့ရေဆာသလိုလိုနဲ့ စိတ်မထိမ်းနိုင်တော့ ဆရာမ လက်ခလေးကို ဆုပ်ကိုငိလိုက်တယ် နူးညံ့လိုက်ထာဗျာ
စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာမ ရယ် တကယ်ချစ်ထာပါ ဗျာ
အို မောင်ကျော်မြင့်ရယ် ကျမလည်းသူ့အပေါ် မလုပ်ရက်တော့ပါဘူးလေ မနေ့က ပါးရိုက်မိလို့ သနားတာကြောင့် ဘာမှမပြောပဲ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မိတယ် ဒါကိုရိပ်မိလို့ သူက ကျမကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းတယ်ရှင် နောက်ပီးခေါင်းငုံ့ပြီးကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ်နောက်သူ့လက်ကြီးက ကျမ နို့ကိုဆုပ်နယ်ပီးကိုင်တယ်ရှင် ကျမလည်းသူ့ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားတယ် ကျမနို့ကို အားထည့်ပြီးညစ်တယ်
အားးးးး နာတယ် အရမ်းပဲ ဖြေးဖြေး
သူလည်းညစ်ထာကိုလျော့ပေးပါတယ် ပါးစပ်ထဲကို သူ့လျှာကြီးလာထည့်တော့ကျမ လည်း သူလျှာကိုငုံပီးပြန်စုပ်လိုက်တယ်
ချစ်တယ် ဆရာမ ရယ် ဆရာမ ရင်ဘတ်ကတင်းနေတာပဲ ကြီးလည်းကြီးတယ်
အို ဘာတွေပြောနေတာလည်းသူ့ကိုသနားလို့ ကို တကယ်ပဲ ရှက်စရာတွေ
အင်းပါ ဆရာမ ရယ်ချစ်လို့ပြောမိတာပါ ကျနော်လည်း ဆရာမရဲ့ ရှေ့ရင်ဘတ်အင်ကျီကြယ်သီးများကိုတလုံးပြီးတလုံးဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဘယာစီယာဂျိတ်ကိုတော့နောက်ကျောဘက်ကနေ ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဝင်းဝါဖြူဖွေးတဲ့နို့ကိုတော့ဆုပ်နယ်မိတယ်ပန်းနုရောင်သမ်းတဲ့နို့သီးလေးကိုတော့ချေလိုက်တယ် နောက်တော့ နို့သီးလေးကို စုပ်လိုက်တယ်
ပလွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်
အားးးးး ရှီးးးးးး ဟင့်
နောက်တော့ နို့သီး အရမ်းစို့လိုက်တော့ ဆရာမ က လူးလွန့်ပြီး
အားးးးး‌ယားတယ်လို့ ကျမလည်း သူကျောကို ထုလိုက်တယ် သူကလည်း ထုတာလောက်တော့မမှုဘူး သူ့အလုပ်ဆက်လုပ်တယ် နောက်သူ့လက်ကြီးက ကျမစောက်ပတ်ကို အုပ်ကိုင်ထားတာလေ အစေ့လေးကို လက်နဲ့ချေုပီးပွတ်တယ်
အားးးးး ရှီးးးးးး အင်းးးးးး
နောက်တော့ ကျမပေါင်ကြားဝင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမစောက်ပတ်ကိုတေ့ထားတယ် စောက်ပတ်ကလည်း အရည်တွေတောင် ထွက်နေသေးတယ်
ဗြွတ် ဘွတ် ဖွတ်
ဖြေးဖြေး နာတယ် အားးးးး နာတယ်လို့
တကယ်ပဲရှင် တောသားများလိုးလိုက်ရင်အရမ်းလိုးတာ လီးကကြီးလို့တော့ မဟုတ်ဘူး အဖုတ်ထဲအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်လိုးတော့ နာတာပေါ့ နာပေမဲ့ သူ့ကိုဖက်ထားမိတယ် ကောင်းတာလည်း ပါလို့ပေါ့
အင်း ကောင်းတယ် ဟာ မသိဘူး ဘာတွေမေးနေတာလည်း
၂ယောက်ထဲ ပဲရှိတာလေ ဘယ်သူ့မှ မသိဘူးလေ
ရှင့်လေး ကို ရှက်နေတာ ရှင့်
မောင်ကျော်မြင့် အဲလိုလည်းကြားရော အရမ်းဆောင့်ချတော့တာပဲရှင်
ဘွတ် ဘွတ် ဗြွတ်
အားးးးး အားးးး ရှီးးးးးး
အရမ်းကြီး သွင်းထာပီး ဝင်လားမေးနေရသေးတယ် ဟွန့်ဒီမယ် အရမ်းနာနေတယ် ရှင့် ဝင်လို့ ဝင်လို့
ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ်
အားးးးး နာတယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ကွာ
ကောင်းလို့ပါ အချက်၅၀လောက် မနားတမ်းလိုးချလိုက်တော့ကျမလည်းကော့တက်သွားတယ်နောက်တော့သူ့ကိုဖက်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျမ စောက်ပတ်ကြီးဆွဲညစ်ပြီး ပြီးလိုက်တယ် သူလည်း ကျမပခုန်းဆွဲပြီးသူ့လီးထဲကအရည်တွေကျမစောက်ပတ်ထဲပန်းချတယ်ခနနေတော့ သူ့လီးကြီးက ကျမအဖုတ်ထဲက ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အရည်တွေကဖျာပေါ်တစက်စက်နဲ့ပေါ့နောက်တော့ကျမအခန်းထဲခေါ်မိတယ် ဘယ်သူ့မှတက်မလာပေမဲ့ စိတ်ချရအောင်လို့ ခေါ်လိုက်ထာပါ အဲဒီညက သူနဲ့ကျမတညလုံးလိုလို လိုးဖြစ်ကြတယ် မနက်မလင်းခင် သူအခန်းပြန်အိပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်သူလည်းထသွားပါတယ် သူလည်းနေမြင့်တော့ကျောင်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းသွားပါတယ် သူသွားပြီး ခနနေတော့ သူ့အကို ရောက်လာတယ်
သူလည်းအနားလာပြီး ကျမ ကိုဖက်တယ် နောက်တော့ကျမကို သူ့အခန်းထဲခေါ်သွားတယ် အတန်းမဝင်ခင် ကျမ တို့လိုးဖြစ်ကြပါတယ် မနက်ဆို အကိုနဲ့လိုးတယ် ည ဆို ညီနဲ့လိုးတယ် ကျမစောက်ပတ်လည်း ကျိန်းစပ်နေတာပဲ ဒီလိုနဲ့တလလောက်ရှိတော့ သူတို့ညီကို၂ယောက် အပြင်မှာပေါ့ရှင် အိမ်မှာစိုလို့ ကျမတယောက်ထဲပေါ့ အဲဒီနေ့က ကျောင်းပိတ်တယ် အိမ်အောက်အဖွားကြီးက ရွာဘက်အလယ်သွားတယ်တပါတ်ကြာမယ်ပြောသွားတယ် အိမ်ပေါ်ထပ်ကျမတယောက်ထဲပေါ့ ရှင်
သူတို့ထွက်သွားတော့ လိုင်းပေါ်မောင်နဲ့ ဆက်ချက် (ချက်ထဲကနေ လိုးခြင်း) ဖြစ်တယ်သူလည်းလွမ်းနေကြောင်း ကျမကလည်း ဆာနေကြောင်း မောင်လိုးပေးရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ချက်မိတယ် အောက်ထပ်က အဘိုးကြီးရဲ့ အကြည့်ရဲရဲပြန်မြင်ယောင်မိတယ် လက်က အောက်ကို ဆင်းပြီးကျမစောက်ပတ်ကို ပွတ်နေမိတယ်။
ကျူပ်နမ်မည်က ကျော်မောင် ကျော်မြင့်ကျော်တင့်တို့ရဲ့အဖေပေါ့ ဆရာမလေးရောက်လာကထဲက လုပ်ချင်နေတာ အိမ်မှာက အဖွားကြီးရယ် သား၂ယောက်ရယ်ကြောင့်မလွတ်လပ်ဘူး ခုသား၂ယောက်နဲ့ အဖွားကြီးက သူ့တို့ရွာဘက်အလှူတန်းရှိလို့သွားတယ် ကျုပ်က အိမ်မှာနေခဲ့တော့ လွတ်လပ်သွားတာပေါ့ ဒါနဲ့သား၂ယောက်ရဲ့ အိပ်ခန်းက နေ ချောင်းမယ်ဆိုပီးဆရာမ ကျောင်းမဆင်းခင် အခန်းထဲနေလိုက်တယ်။
တနေ့ကျမ ကျောင်းက ဆင်းတော့ အိမ်ပြန်လာတယ် အခန်းထဲရောက်တော့ ရေမချိုးခင် ခဏနားတယ် ဖုန်းဖွင့်အင်တာနက်ကြည့်တယ် ကျမယောက်ျားလိုင်းပေါ်မရှိတာနဲ့လျောက်ကြည့်တယ် မက်စင်ဂျာဘက်က
ကျမ မှာ fake acc လုပ်ထားတာ ယောက်ျားတောင်မသိဘူး ကျမ ကလည်း ပြန် Hiလိုက်တယ် ဟိုဘက်က accနမ်မည်က Tiger တဲ့ ဘယ်ကလည်းနော့မသိဘူးတပါတ်ရှိပြီ လိုင်းပေါ်ကဆိုတော့ ချစ်ရေးဆိုထားတယ် အဖြေတော့မပေးသေးပါဘူး အပြောလေးကတော့ ညက်ပါတယ် ပုံပို့တော့ ပုံမှန်ရုပ်ပါပဲ အဖြေတောင်းတာကို ကြာတယ်ပြောနေလို့
ဒါနဲ့ကျမလည်း သူ့ကို အဖြေပေးလိုက်မိတယ် သူကလည်းအဖြေရတော့ လိုင်းပေါ်ကနေ လက်ခလေးကိုင်တာက စလာတာပေါ့ နောက်တော့ နို့ကိုင်ချင်တယ် နို့ပုံတောင်းတယ် ကျမလည်းအဲလောကိတော့မလွယ်ဘူးပြောပီး လိုင်းချလိုကိတယ် နောက်တော့ အပြာဆိုက်ထဲဝင် စာဖတ်ရတာ စိတ်မပါဘူး ရှူးပေါက်ချင်လို့အိမ်သာသွားတယ် အပြန်ကျ ညီးသံကြားတာနဲ့ အိမ်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်တယ် ကျမလည်း ဦးကျော်မောင်ဖျားတယ်ထင်လို့လေ
ဟင်း အင်း အင်း
အဘ မောင် ဘာဖြစ်လို့လည်း
ကျမ လည်းသု့နဖူးလေး စမ်းတော့ ကိုယ်က နွေးရုံပါပဲ အဘမောင်က ကျမလက်အပေါ်ကအုပ်ကိုင်ပီးလက်ကိုဆွဲယူပီးထိုင်လိုက်တယ် နောက်တော့ ကျမကိုဖက်ထားတယ် သူ့လက်ကြီးက ကျမ နို့အုံပေါ်ညစ်နယ်တယ်
အို အဘမောင် ရယ်
ဆရာမ လေး ရယ်
ခု သိပီမလားဆရာမလေး က အရမ်းလှတော့ ကျနော်ဖြစ်ချင်မိတယ်
ပြောရင်းနဲ့ကျနော်လည်း ဆရာမလေး ကို ဖက်ထားမိတယ်အသားလေးဖြူ ဖွေးနုနေတော့ ဖက်လို့မဝဘူး ဒါနဲ့အင်ကျီအပေါ်ကပဲ နို့ကိုနယ်လိုက်တယ် တင်းနေတာပဲ နို့ကိုညစ်လိုက်တော့ ငြီးသံလေးထွက်တယ် ကျုပ်လည်းသူ့နှုတ်ခမ်းစုပ်လိုက်တယ် သူလည်းရုန်းတယ် ကျုပ်ကလည်းသူ့ပါးကိုသေချာကိုင်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲကျုပ်လျှာထိုးထည့်လိုက်တယ်
အွန်း အု အူး
ကျမလည်း ရုန်းသေးတယ် သူလျှာကြီးက ဇွတ်ထိုးတော့ ကျမလည်း စုပ်မိလိုက်တယ် လျှာကပါးစပ်မွှေလိုက်တော့ကျမ လက်က သူ့ကိုဖက်ထားမိတယ် သူကလည်း ရှေ့ကနှိတ်စိ တွေကို ဖြုတ်ချပြီး လက်က ကျောအောက်ဝင်ပြီး ဘော်လီဂျိတ်ကို ဖြုတ်တယ် ဘော်လီလည်းချောင်ရောအပေါ်မတင်ပြီး ကျမရဲ့ နို့ကိုနယ်တော့တာပဲ ဖြေးဖြေးနယ်လိုက်တင်းတင်ဆုပ်ကိုင်လိုက် နို့အသီးလေးကို ချေလိုက် နောက်တော့ ကျမ နို့သီးကို စို့တော့တာပဲရှင်
အားးးး ရှီးးးးးး ဖြေးဖြေး အဘမောင် ယားတယ်
ပြောမှပဲ ပိုစို့တော့တယ် နောက်ပီးတော့ လက်က အောက်ဆင်းပြီး ထဘီထဲကနေ ကျမစောက်ပတ်ကို ပွတ်တယ် အရည်ကလည်းစိမ့်ထွက်လာတယ် သူ့လက်ညှိုးကကျအဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တယ် နောက်တော့ ကျမ လက်ကို ဆွဲယူပြီး သူ့လီးပေါ်တင်လိုက်တယ်
ဟာ အဘမောင် အကြီးကြီးပဲ
နောက်တော့ ကျမ ပေါင်ကြားဝင်ထိုင်ပြိး ကျမ အဖုတ်ကို တေ့ထားပြီး သွင်းချတယ်
ဗြစ် ဖွတ် ဖွတ်
အားးးးး ရှီးးးးးး နာတယ် နာတယ်
အင့် ဘွတ် ဘွတ်
အားးးးးနာပါတယ် စို ဖြေးဖြေး
တကယ်ပဲရှင် အသက်တာ ကြီးတာ လုပ်နိုင်တယ်ရှင် လီးကလည်း သံချောင်းကြီးလို မာနေတာပဲကျမ အထုတ်ထဲလည်း ပြည့်ကြတ်နေတာပဲ လက်မောင်း၂ဖက်ကိုကိုင်ပြီး ဆောင့်လိုက် နောက်ပြီး နှုတ်ခမ်း ကို စုပ်တယ် ကျမလည်းပြန်စုပ်လိုက်တယ်
အင့် ဘွတ် ရော့
အား ရှီးးးးးး ဟင်းးး
အင်း ကောင်းတယ် ဆောင့်ပေး
ခုအတူတူတောင် အိပ်နေပီပဲ ဆောင့်မယ်နော်
အားးးး အားးးးး ရှီးးးးးး ဝင်တယ် ထိတယ်
ဘယ်ကို ထိတာလည်း ချစ်
ဟာ အဖုတ်ကို ဟုတ်ပါဘူး ရှက်စရာကြီး သိဘူးကွာ
ပြောပ်ါချစ် ၂ယောက်ထဲပဲသိတာပါ ပြောပါ
သူ ထိုးထည့်တာအထဲထိ ရောက်ထာ
သားအိမ်ထဲထိ ရောက်တာတကယ်ပဲ တုတ်လည်းတုတ်တယ် ရှည်လည်းရှည်တယ် ရှင့်
ဗြိ ဘွတ် ဗြစ်
အ အားးးး နာတယ် နာတယ်လို့
ဘွတ် ဖွတ် အားးးးး သေပြီ သူများကို ချစ်တယ်စို
ဘယ်သူ့ ချစ်ထာလည်း ရော့ အင့်
နာတယ် အားးးးး ရှီး မောင့် ကိုချစ်တယ်လို့
တကယ်ပဲရှင် သူ့သားတွေတောင် မောင် မခေါ်ခဲ့ဘူး ခုသူအလိုးကောင်းတာနဲ့ မောင်လို့ ခေါ်လိုက်မိတယ်ရှင်
မောင် ချစ်တယ် အရမ်းချစ်တယ် ရှင့်
ကျမလည်း သူကို ချစ်တယ် ပြောပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းကို ကျမ ကပဲစုပ်လိုက်တယ် သူလည်း ပြန်စုပ်ပြီး ကျမ နို့ကိုစိတ်ကြိုက်နယ်တော့တာပဲ အောက်ကလည်း သူ့လီးအကြီးနဲ့ ကျမ စောက်ပတ်ကိုတအားလိုးတော့တာပဲ ကျမလည်း အိပ်ယာခင်းကို လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီး ကော့ပေးလိုက်သူလည်းအချင်၃၀လောက်ဆောင့်ပီး လီးကပွတက်လာတယ်ကျမလည်း သူ့လီး ညစ်ချပီအရည်တွေပန်းချလိုက်တယ်သူလည်းကျမစောက်ပတ်ထဲသူ့အရည်တွေ ပန်ချလိုက်တယ် အောက်က အိပ်ယာခင်းပေါ်လည်း အရည်စိုပီးကွက်နေတာပဲ နောက်တော့ကျမ ပေါ်ပိကျ ပြီးမှိန်းနေတာပေါ့ ကြာလာတော့ လေးတာနဲ့
ည၉နာရီလောက် ကြတော့နိုးလာပီး ဟိုစမ်း ဒီစမ်းနဲ့ နို့ကိုနယ်တယ် နောက်ကျမ ပေါင်ကြားဝင်ပြီး သူလီးနဲ့အဖုတ်တေ့ပြီးသွင်းချလိုက်တယ်
ဗြိ အားးးးး ရှီးးးးးး မောင်ရယ် တကယ်ပဲ လုပ်နိုင်တာပဲ
တကယ်ပဲရှင် သူလီးက အထဲဝင်တာနဲ့ ကျမစောက်ပတ်ကလည်းအရည်က စိမ့်နေတာပဲ ဒီတခါလိုးတာက ကြာတယ် ခါးကိုလှည့်မွှေပြီးလိုးတော့ ကျမစောက်ပတ်နံရံတွေ ထိုးမိတာပေါ့
မောင်ရယ် ကောင်းတယ် ကွာ ဆောင့်ပေး အရမ်းတာလိုးချလိုက်တော့ သူကလည်း အောက်စိုက်ပီးလိုးချလိုက်တော့ သားအိမ်ကိုထိအောင်လိုးတယ်ရှင်
ဘွတ် ဖွတ် ဒုတ်
အားးးးး အမလေး သေပါပြီ မောင်ရယ်
နောက်တော့ ဆောင့်ရင်းနဲ့ အနားကပ်ပြီး လေးဘက်ကုန်းဖို့ ပြောတယ် အရည်တွေကလည်းထွက်နေတာ ကောင်းကလည်း ကောင်းနေတော့ ကုန်ပေးလိုက်တယ် နောက်ကနေ သူလီးကြီးနဲထိုးထည့်လိုက်တယ်
အားးးး ရှီးးးးးး အားးးး အချက်ပေါင်း၃၀လောက်ဆောင့်ပီးတော့ ဖင်ထဲမှာ တစ်စို့စို့ နဲ့သူ့လက်မကြီးက ထိုးနေတာရှင့်
မောင် ဖင်ကို မလုပ်နဲ့နော်
နောက်တော့ အဖုတ်ထဲ မှာဟာကနဲ ဖြစ်သွားတော့ ဆက်တိုက်ပါပဲ ကမဖငိပေါက်ကို တေ့ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ်
ဗြိ အားးးးး ဗြွတ် သေပီ အားးးး နာတယ်
တကယ်ပါ ကျမ ဖင်ခံဘူးမဲ့ မထင်မှတ်ပဲနဲ့အထည့်ခံလိုက်ရတော့ အစကတော့ နာတာပေါ့ နောက်တော့ခံနိုင်လာပါတယ် သူလီးကလည်း အဆုံးထိ သွင်းလိုက်တယ် နောက်သူ့လက်က ရှေ့ကနေ ကျမ စောက်ပတ်က အစေ့လေး ကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ကျမ စောက်စေ့က ကျင်တက်လာပြီး အရည်တွေ ပန်းခုပ်မိတယ်ကျမဖင်ကလည်းသူ့လီးကို ဆွဲညစ်သလို လုပ်လိုက်တော့ သူကလည်း အားအီး အသံထွက်ပြီး ကျမဖင်ပေါက်ထဲ အရည်တွေ ပန်းချလိုက်တယ် အဲဒီညက တညလုံးလိုးတယ်မနက်လင်းတော့ သူရင်ခွင်ထဲမှာပေါ့ခန မှိန်းရင်နာရီကြည့်လိုက်တော့ အတန်းဝင်ရမှာ တွေးမိတာနဲ့ ဇွတ်ထပြီး ရေမိုးချိုး အဝတ်စား လဲပြီး ထွက်မယ်လုပ်တော့ အဘမောင်က အခန်းဝ ကနေစောင့်ပြီး ဖက်ထားတယ်ရှင် ဘော်လီပေါ်ကနေလာနယ်တော့ ကျမ လည်း အင်ကျီကြေမှာစိုးလို့သူ့ပုဆိုး ကိုချွတ်ပီး သူ့လီးကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ တောင့်တင်းလာပြီး အရေခွံကို ဆွဲတင်ပြီး နောက်ကျမနှုတ်ခမ်းနဲ့ ငုံလိုက်တယ် ထိပ်လေးကို လျှာနဲ့ ကစားပေးလိုက်တယ်
အား ပပရယ် မရတော့ဘူးကွာ ကုန်းပေးတော့ကွာ
ဟင် ပန်းချလိုက်လေ မောင်
နောက်တော့ ကျမလည်း နံရံဘက်ကိုကိုင်ပြီး ကုမ်ျပးလိုက်တယ် သူလည်း နောက်ကနေ အချက်၃၀လောက်ဆောင့်ချပြီး အရည်တွေ ပန်းချလိုက်တယ် ကျမလည်းယူနီဖောင်းကို ပြန်သတ်ချပြီး ကျောင်းကို ထွက်ခဲ့ရပါတယ်
မနက်ပိုင်း အတန်းဝင်ပြီး နေ့ခင်းဘက် တခြားဌာန ဘက်က ဆရာမ အပြောင်းဝင်လာတယ် သူကလည်း လိုင်ခန်းမရသေးတော့ အခန်းရှာပေးဖို့ ကျမကို အကူညီတောင်းခိုင်းထားတယ် ကျမလည်း ရှာထားအုံးမယ်ပြောထားတယ် ညနေရောက်တော့ ကျမလည်း အဆောင်က အိမ်ရောက်တော့ ဦးကျော်မောင်နဲ့တွေ့တော့ ပြောပြလိုက်တယ် ဆရာမ တယောက် အခန်းငှါးချင်တာပြောပြလိုက်တယ် ဦးကျော်မောင်ကလည်း ဆရာမ ဆိုရင်တော့ ငှါးမယ်တဲ့
ဟွန့် ဆရာမ ဆိုငှါးမှာပေါ့ မသိရင်ခက်မယ်
ပပကလည်း ကွာ ကို က ပပတယောက်ထဲကို ချစ်ထာပါ
ပြောရင်းနဲ့ ကျမ နို့ ကိုညစ်တယ် နောက်တော့ကျမနှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက်တယ် မျက်တောင်စင်းကျမိတယ် အဲဒီလိုနဲ့အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ပီး ကျမအပေါ်တက်ခွတယ် ကျမ အဖုတ်ကလည်း လီးနဲ့လိုးတော့မယ်စို အဖုတ်က အရည်စိမ့်လာတယ် ဦးကျော်မောင်ကလည်း ရိပ်မိတယ်နောက်တော့ ကျမ ပင်တီဆွဲချွတ်ဖို့လုပ်တော့ ဖင်နဲ့တစ်နေတော့ ကြွပေးလိုက်တယ် သူ့လက်ထဲပင်တီပါသွားတော့ ကျမရဲ့ပင်တီ ဂွဆုံနေရာကိုနမ်းကြည့်တော့
ချစ်လို့လေ ပပ ကလည်း
နောက်တော့ ကျမအနားကပ်လာပီး တက်ခွတယ် သူလီးကြိးနဲ့အဖုတ်တေ့ပြီးသွင်းတယ်
ကျမလည်း သူ့ကို ပြန်ဖက်ထားမိတယ် သူ့လိုးချက်တွေ အရမ်းကို ဆောင့်တယ် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကလည်း ပွတ်ဆွဲသွားတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကိုဖက်ထားမိတယ်
ဘွတ် ဖွတ် ဘွတ်
အားးးးး အားးးးး နာတယ် နာတယ် ဖြေးဖြေး
အဖုတ်ကနာတာ ရှင့် ခုရှင်လိုးနေတဲ့ဟာရှင့်
အား ဖြေးဖြေးကွာ အရမ်းလုပ်ထာပဲ
ဟွန့် ဒီက ကျနာတယ် မောငိ့လီးက အရမ်းကြီးတယ်
ကျမကသာပြောနေတာ တကယ်တော့ မလျော့ပါဘူး လုပ်ပါများလာတော့ ကျမစောက်ပတ်ကလည်းအရည်ထွက်လာပီး အရမ်းလညိးမကြတ်တော့ဘူး သူ့လည်ပင်းကို ဖကိပြီး အောက်ကနေကော့ပေးလိုက်တယ်
ကောင်းနေရင် အရမ်း ဆောင့်မယ်ကွာ
အားးးးး ရှီးးးးးး ဝင်တယ် မောင်ရယ်
တကယ်ပဲရှင် အသက်ကြီးသလောက် လိုးနိုင်တယ်ရှင်ကျမစောက်ပတ်ကလည်း သူ့လီးကြီးညစ်ပေး နောက်တော့သူကလည်း အဆောင့် စိတ်လာတယ် လိုးရင်းနဲ့
ပပ လေးဘက်ထောက် ပေးကွာ
ကျမလည်း ကုန်းထပြီး လေးဘက်ကုန်ပေးလိုက်တယ် သူလည်းနောက်ကနေရာယူပြီး ကျမစောက်ပတ်ကို သူ့လီးနဲ့တေ့ပြီး ထိုးချလိုက်တယ်
ကျမလည်း အိပ်ယာခင်းကိုစုပ်ကိုင်ထားတယ် သူလည်းကျမ တင်းပါးဖြစ်ညစ်ပြီး ဆောင့်ချတယ် ကျမလည်းကောင်းလာတာနဲ့ ပြီးလိုက်တယ် သူကလည်း အချက်၃၀လောက်ဆောင့်ပြီး ကျမစောက်ပတ်ထဲအရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် အဲဒီညကတညလုံးလိုးလိုက်ကြတာသူက ၅ချည် ကျမက ဘယ်လောက်မှန်းမသိအောင်ပါပဲရှင်
နောက်ရက်တွေမှာ ဆရာမတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ် သူနမ်မည်က ဒေါက်တာမို့မို့ခင် မန်းလေးကနေပြောင်းလာတာမန်လေးမှာတော့မြင်ဘူးပါတယ် ဌာနခြင်းကမတူတော့ မရင်းနှီးဘူးလေ ခုတော့သူ့ကိုအခန်းမပေးနိုင်သေးတော့ ကျမနဲ့အတူအခန်းငှါးနေရတာပေါ့အသက်ကလည်းရွယ်တူဆိုတော့ ရင်းနှီးလွယ်ပါတယ် ညရောက်တော့ ဖုန်းလေးတွေနဲ့ ပွတ်ကျတာပေါ့သူကလည်း ဆက်ချက် (ချက်ထဲကနေ လိုးခြင်း) နေတာ ကျမနဲ့ခပ်ခွာခွာပေါ့ ကျမကလည်း ယောက်ျားနဲ့ချက်သေးတယ်စာကကြာနေတော့ စိတ်မရှည်ဘူး မို့မို့ကလည်း အိပ်ချင်ချင်နဲ့ ချက်နေတာနောက်ဖုန်းလွတ်ကျတယ် သူ့ကို ပြန်ပေးဖို့ ဖုန်းယူပီးပေးဖို့ လုပ်တော့ သူက ကျမ ယောက်ျားနဲ့ ချက်နေတာမြင်မိတာ အမလေး ဒါကြောင့် ကျမယောက်ျားက ကြာနေတာကိုကျမလည်း မို့မို့ကို ပြောလိုက်ရတယ်
ဟင် အင် ဘာလည်း ပပ
နင့် ဖုန်း အောက်ကျနေလို့ ပြောနေတာ အိပ်ရေးတွေပျက်နေလား
အေးဟာ စာတွေဖတ်ရ လိုင်ပေါ်က စာဒေါင်းရတာနဲ့အိပ်ရေးပျက်သွားလို့
အမယ်မယ် ချက်နေတာလည်း ပါတယိမလား
အင်း ချက်တယ် နင်ကြည့်လိုက်တယ်မလား
တကူးတကမကြည့်ပါဘူး နင့်ဖုန်းအောက်ကျလို့ မြင်မိတာပါဟာ
မပြောပါဘူး ငါလည်း ချက်တာပဲ
မောင်ဇော် ဆိုတဲ့ acc က ငါ့ယောက်ျားဟေ့
အယ် နငိ့ယောက်ျား မသိလို့ပါဟာ
ရတယ် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးအပြင်မှာကော နင်ဖြစ်လိုက်သေးလား မို့မို့
အင်း ဖြစ်မိတယ် နင့်ယောက်ျားက အရမ်းလုပိနိုင်တာပဲ
ဘာလည်း ဟာ နင်က နှမျောနေတာလား
နှမျောတာထက် နင်ပြောတာကို အံ့သြလို့ဟေ့
ပြောရင်းနဲ့ မို့မို့က ကျမ အဖုတ် ကို လာစမ်းတော့
ပပ နင့်အဖုတ်က အရည်တွေ ထွက်နေတယ်
အောက်ထပ်မှာ အဖိုးကြီးက နင်လာငှါးမယ်ကြားကထဲက ကဲချင်နေတာ
အင်း အဲဒီညက စကားပြောရငိးနဲ့ ၂ယောက်သညးအိပ်ယာ ဝင်ပြီး မနက်ကြ အတန်းဝင်ကြရတယ် အတန်းဝင်ပြီးလို့ ကျမတယောက်ထဲပဲအိမ်ပြန်လာတော့ အိမ်မှာဧည့်သည်ယောက်နေလို့ ဦးကျော်မောင်က သူအခန်းထဲ မိတ်ဆက်ပေးတယ်
သူ့နမ်မည် က စစ်အောင် စစ်တပ်ဘက်က ဆရာမ ကို စိတ်ဝင်စားလို့တဲ့
ဟင် ကျမ က လူတကာ လိုက်ကုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှင့် အဲလောက်လည်း အပေါစားမဟုတ်ဘူး
မဟုတ်ဘူး ဆရာမ ကျနော် တကယ်စိတ်ဝင်စားတာပါ
ကျမ လေ ဆရာမ တယောက်ပါ ရင်ခုန်စရာလေးတွေမက်မောပေမဲ့ လူတွေသိမှာအရမ်းကြောက်တယ်
ကိုကျော်မောင်က စိတ်ချပါ ဆရာမ ကျနော် ကအပြင်သွားစရာရှိလို့ ဆရာမ မို့မို့ကော
သူက သူ့နယ်ခနပြန်မယ် ပြောသွားတယ်
ဒါဆို ဆရာမ ကိုစစ်အောင် ခနထားခဲ့မယ် ဦးကျော်မောင်အပြင်ထွက်သွားတော့ ကိုစစ်အောင်နဲ့ကျမ ၂ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တယ်
ကိုစစ်အောင်လေ ကျမအနား တိုးလာပြီး ကျမ လက်ခလေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဖက်ထားတယ် တကယ့်သမီးရည်းစား အတွဲကျနေသလိုပဲ နောက်တော့ ကျမနှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူတယ်
ကျမလည်း ပြန်စုပ်လိုက်တယ် သူ့လက်ကြီးက. ကျမ နို့ကို လာညစ်တယ်
တင်းနေတာပဲ ပပ ရယ်
ဖြေးဖြေးကွာ အရမ်း နယ်တာပဲ
ပပ နို့က ကြီးတော့ ဖြစ်မိတာပေါ့
နောက်တော့ ကျမ ကိုလှဲချပီး နှုတ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်တယ်
အဲလို စုပ်ရင်းနဲ့. ကျမရဲ့ အဝတ်စားတွေကို ချွတ်ပြီး ဘယာစီယာ ဖြုတ်တယ် အရမ်းကို ကျွမ်းတဲ့လူကြီး ပေါ်လာတဲ့ ကျမ နို့ကို နယ်ပြီး အသီးလေးကို ချေတယ်
အား အားးးးး ဖြေးဖြေးချေလေ နောက်တော့ ကျမ နို့ ကို စို့တော့တာပဲ
ယားတယ် ကို ဖြေးဖြေးစို့လေ
စို့ကောင်းလို့ပါ ပပ ရယ်
နောက်တော့ သူ့လက်ကြီးက အောက်ဆင်းပြီး ကျမစောက်ပတ်ကို ပွတ်တယ် အရည်တွေကလည် စိမ့်နေတော့ သူ့လက်ကို ဖြစ်မိတယ် နောက်တော့ သူကလေ ကျမအပေါ်တက်ခွတယ် သု့လီးကြီးနဲ့ ကျမအဖုတ် ကိုတေ့ပြီးသွင်းတယ်
ဗြိ ဗြစ် ဗြွတ်
ကို့ လီးက အကြီးကြီးပဲ ဖြေးဖြေးကွာ
ကိုစစ်အောင် ဟာ အနမ်းလေးတွေပေးလိုက် နို့ကိုနယ်လိုက် လီးကြိးနဲ့လိုးလိုက် ကြာလာတော့ အရည်တွေ ထွက်လာပြီး ကောင်းလာတယ်
ကျမ လည်း အရမ်ကောငိးတာပဲ ကို ရယ်
ပပ ရယ် ကို လိုးလိုက်တိုင်း ပပ နို့ကြီးက ရမ်းခါနေတာပဲကိုင်ရတာလည်း အားမရဘူး
ကိုလီးက တုတ်ခဲနေတာ ပပ အဖုတ်ထဲမှာလည်း ပြည့်ကြတ်နေတာပဲ
တကယ်ပဲ အရမ်းလိုးနိုင်တဲ့သူကြီး လီးကလည်း ကြီးတယ် လိုးလိုက်ရင်လည်း ဘာကြမ်းသလည်းမမေးနဲ့သူများ၂ခါပီးလို့ သူက ၁ခါမပီးသေးဘူး
ကို့ ကို ချစ်လား
ဒီလောက်ကြီး လိုးထားတာ မသိဘူး လား
သူက ကျမ ကို နှုတ်ခမ်းကို လာစုပ်တယ် ပြွတ်
ပ ကလည်းကွာ သိချင်လိုမေးတာကို
တကယ်တော့ ကျနေိာ ဒီလိုဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဆရာမတယောက်ကို လိုးရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး နို့ဆိုတာကလည်း တင်းပြီးအိနေတာ သူ့စောက်ပတ်ကလည်းအပျိုမဟုတ်ပေမဲ့လိုးလို့အရမ်းကောင်းတယ်
တက္ကသိုလ်က ဆရာမတယောက်ဗျာ အသားဖြူ ဝင်းနေတာ နို့ကလည်းနယ်လိုက်ရင်လျံထွက်ကိုင်လို့အရမ်းကောင်းတာ စောက်ပတ်ကလည်းလိုးလိုက်ရင် စီးနေတာလိုးလိုမဝနိုင်ဘူး
ကို တော်ပီလေ ဒီမှာကိုလိုးထားလို့ အဖုတ်တွေလည်း ကျိန်းနေပြီ ရင်ဘတ်လည်း အောင့်နေပြီ နို့အသီးလေးတွေဆိတ်ဆွဲထားလို့နာနေပြီ
မရဘူးကွာ လိုးချင်သေးတယ် လေးဘက်ကုန်းပေးအူံး
ကျမလည်းသူစိတ်ကြိုက် ကုန်းပေးလ်ုက်တယ် သူကလည်း အရမ်းလိုးခည့်လိုက်ခါလူလည်း ပြိုင်းပြီး မနက်ကြ ကျောင်းမတက်နိုင်ပဲ ခွင့်ယူလိုက်ရတယ်
ကျနော်မောင်ဇော် လည်း မိတ္တူဆွဲလိုက်အလုပ်တွေများနေတယ် မိန်းမဆီက ဖုန်းဆက်တယ် သူ မန်းလေးကျောငိပြန်ပြောင်းရမယ်ပြောတယ် မို့မို့ခင်ပါ ပြောင်းတဲ့အထဲပါတယ်တယ်ပြောတယ် ကျနောလည်း ရေငတ်သုံးရေတွင်းထဲကျဆိုသလိုပဲ ပေါ့လေ တပါတ်လောက်ရှိတော့ ကားနဲ့ရောက်ချပါလေရော ပစ္စည်းတွေကူချပြီး သူနေမဲ့ပခန်းက တန်းမရတော့ ကျနော့မိတ္တူအခန်းလေးထဲမှာ အတူနေရတာပေါ့ ညရောက်တော့ စောစောအိပ်ဖို့ အခန်းထဲ ဝင်လိုက်တယ် အဝတ်စား တွေအားလုံး ချွတ်ပြီး မိန်းမ ကို ဖက်လိုက်တယ်
လွမ်းလိုက်ထာ ပ ရယ်
ပ လည်း မောင့်ကို လွမ်းတာပဲလေ မောင့်ဟာကြီးက မပြောချင်ဘူး တကယ်ပဲ မာနေတာပဲ
အဲဒါ ပ ကို ချစ်ချင်လို့လေ
ကျနော် အိပ်ယာပေါ်ရောက်တာ လှေချည်းထိုးရိုးရိုးနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တယ်
ဘွတ် ဘွတ် အား
မောင် ဖြေး ဖြေး ကျနော်လည်း ဆာဆာနဲ့ ၂ချည်လောက်လုပ်ထည့်လိုက်တယ် မနက်ကျတော့ ဆိုင်ဖွင့် မို့မို့ခင်က ရောက်လာပြီး အေမီက သူ့အိမ်မှာပါတီလုပ်မယ် ညနေ အရောက်လာခဲ့ဆိုလို့ ကျနော်တို့ လင်မယာ၂ယောက် ဆရာမ အေမီတို့ စုံတွဲအိမ်ရောက်သွားတယ် ။
အေမီတို့ အိမ်မှာ သူ့ရည်းစား ကိုခန့်မောင်ရယ် အေမီရယ် အတူထိုင်ကြပြီး စာဖို့သောက်ဖို့ အတွက် မီးဖိုခန်းထဲ ကျနော်မိန်းမ ကို ခေါ်သွားပါလေရော ကျနော်နဲ့ ကိုခန့်မောင်ပဲကျန်တယ် ကိုခန့်မောင်ကလည်း ကျနော်မိန်းမ ဖင်ရမ်းတာကို ကြည့်နေတယ် တကယ်ပဲ
လိုပါသေးတယ် ကိုဇော် ကျနော်ကပိုက်ဆံရှာပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးတယ် နောက်ပြီးကဲချင်သေးတယ် ကျနော်လည်းလွတ်လပ်သလို အေမီကိုလည်း မချုပ်ချယ်ဘူး
ကောင်းပါတယ် ကိုခန့် နေ့တိုင်းဝက်သားစားနေရင်အီနေမှာပေါ့ တခါတလေ ချဉ်ပေါင်ဟင်းလေးပေါ့
ကိုဇော်မိန်းမ ပပက လည်း မိုက်တယ်နော်အရမ်းကိတ်ထာပဲ
အေမီ လည်း မိုက်ပါတယ် စလင်းဘော်ဒီလေးပဲ ဗျ
ခနနေတော့ အေမီရောက်ချလာပြီး ပပက နဲနဲကျန်တာချကိပြုတ်ပြီး ငြီးစိစိဖြစ်လို့ တဲ့ ကိုခန့်လည်း ကျနော်လည်းခနရေချိုးမယ်ပြောပြီးထသွားလိုက်တယ်။
အေမီနဲ့ ကျမ စားဖို့သောက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးလို့အေမီက အပြင်ဖက် ထွက်သွားတယိ ကျမက ငြီးစိစိဖြစ်လို့ ခနနားနေတာ ရေချိုးမှအဆင်ပြေမယ် ဆိုပြီး အပေါ်ထပ်ကိုတက်ခဲ့တယ်လေ ဒါနဲ့ရေချိုးခန်းထဲရေချိုးလိုက်တော့ လန်းဆန်းသွားတယ် အခန်းထဲကသဘက်သုတ်နေတုန်း တခါးဖွင့်လိုက်တော့ ကိုခန့်ဖြစ်နေတယ်
ဟင် ပပ ရှိမှန်းမသိလို့ ဝင်လိုက်တာ လှလိုက်ထာ
ကိုခန့်မောင် ဟာ အနားလာပြီး ကျမကိုဖက်တယ် ကျမလည်း ရုန်းတာပေါ့
လွှတ်ပါ အောက်မှာ အေမီတို့ ရှိတယ်လေ
သူက ကိုဇော်နဲ့ အဆင်ပြေလောက်ပြီ
နောက်တော့ ကျမ ကို ပွေ့ချညိပြီး သူ့အိပ်ယာထဲကို ခေါ်သွားတယ် အိပ်ယာပေါ်ရောက်တာနဲ့ ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တော့တာပဲ
လက်ကလည်း ကျမ ရဲ့ နို့ကိုနယ်တယ် ဖြစ်ညစ်တယ်
ပပ နို့က ကြီးတော့ နယ်လို့အရမ်းကောင်းတာပဲ
နောက်တော့ကျမ နို့ကို စို့တော့တာပဲ
လက်ကလည်း အောက်ပိုင်းဆင်ပြီးကျမစောက်ပတ်ကို ပွတ်တယ် အစေ့လေးကို ချေတော့မရည်တွေက အရမ်းထွက်တယ်နောက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ကျမ စောက်ပတ်အဝကိုတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းချလိုက်တယ်
အားးးး နာတယ် နာတယ်
ဗြစ် ဗြစ် ဘွတ်ဘု
တကယ်ပဲ အရမ်းကြမ်းတာပဲ စသွင်းကထဲက မနားဘူး ကျမလည်း သူရင်ဘတ်တွန်းထားရမလို အောက်က သူဆီးခုံတွန်းရမလိုနဲ့ နောက်တော့ သူ့လက်မောင်းကိုင်ထားမိတယ်
ပပ ယောက်ျားက အောက်မှာ သူမသိအောင် ခိုးလုပ်ရတော့ အရမ်းကောင်းသလိုပဲ ပပအဖုတ်က စီးနေတာပဲ
ကျမ လည်းသူ့လက်ကိုင်ရာကနေ သူ့ကျောကိုဖက်ထားမိတယ် ကိုခန့်ကလည်း ကျမ မျက်နာနဲ့ကပ်နေတော့ ကျမနှုတ်ခမ်းဆွဲစုပ်လိုက် စကားကိုမတိုးမကျယ်နဲ့ ပြောလိုက် နောက်ပီး ကျမ ပါးစပ်ထဲသူ့လျှာထိုးထည့်လိုက် ပြီးတော့ကျမ နို့ ကိုနယ်တယ်အသီး ကို ချေတယ် ချေလို့ဝရင် နို့ကိုစို့တယ် တဖက်ကို နယ်ထားတယ် နောက်တဖက်ကို ပြောင်းစို့ရင် ကျန်ခဲ့တဲ့တဖက်ကို နယ်တယ် ကျမလည်းသူ့လုပ်တာကိုသဘောကျတယ်
ပပ ကို ဆောင့်ချမယ်ကွာ
ဘွတ် ဘွတ် ဗြစ် ဗြစ်
အားးးးး အရမ်းဝင်တာပဲ ကို ရယ်
ကျမ လည်း ကောင်းလွန်းလို့ သူ့လီးကို ကျမ စောက်ပတ်နဲ့ ညှုပ်ချလိုက်တော့သူလည်း တရှီးရှီး ကျမ အဖုတ်ထဲ အရည်တွေပန်းချပြီး အတူတူပြီးလိုက်ကြတယ်နောက်တော့ ကျမ ဘေးလှဲချပြီးနားနေလိုက်တယ်ခနနေတော့ သူက ကျမကို ဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို စုပ်လိုက် နို့ကိုနယ်လိုက် နောက် ကိုခန့်လီးက ပြန်မာလာပြီး ကျမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်နောက်ကနေ လိုးတယ် လိုးချက်က အရမ်းပြင်းတယ်
အားးး ကိုရယ် ဖြေးဖြေးကွာ
အချကိ၃၀လောက်ရှိတော့ ကျမ အဖုတ်ထဲ က ကျငိတက်လာပြီး ပြီးလိုကိမိတယ် ကိုခန့်ကတော့ ဆက်လုပ်တယ် သိမကြာခင် သူ့လီးက ပွတက်လာပြီး ကျမအဖုတ်ထဲပန်းချလိုကိတယ် ခနနေပြီးကိုခန့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ် ကျမလည်း ခနနေတော့ ရေချိုးခန်းဝင်ပြီးအတူချိုးလိုက်တယ်ခနနေတော့ ကိုခန့်အရင်ထွက်ပြီး ဧည့်ခန်းကိုသွားတယ် ကျမ လည်းသိတ်မကြာခင် ဧည့်ခန်းဘက်ထွက်လာပြီး ကျမယောက်ျားနားကပ်ထိုင်ပြီး လက်စုံစကားပြောကြတယ် ခနနေတော့ မို့မို့တို့ အတွဲရောက်လာကြတယ်သု့ဘေးကတော့ နိုင်ငံခြားသား မစ္စတာဒေးဗစ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးကြတယ် ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့က သိပြီးသားဖြစ်လို့ ကျမ တို့လင်မယားနဲ့ ပဲ မိတ်ဆက်တာပါ ကျမယောက်ျားနဲ့တော့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး ကျမကိုတော့ ကျမရဲ့ ညာဘက်လက်ဖမိုး နမ်းတယ် နောက်တော့ သောက်ကြစားကြတော့တာပဲ ယောက်ျားလေးတွေက စကားပြောကြပေမဲ့ ဒေးဗစ်က အေးဆေးပဲနေတယ်
ခနနေတော့ အေမီက ဂိမ်းတခု ဆော့မယ် မိန်းခလေးနဲ့ ယောက်ျားလေးဆော့မယ် အဲဒါကတော့ ကိုယ့်အတွဲနဲ့ တခြားသူအတွဲ ကို ဖလှယ်ကြမယ် ဆိုတော့ ကျမလည်း ယောက်ျားကိုကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမသဘောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ပေါ့ အားလုံးအတွဲကိုယ်စီခွဲလိုက်တော့ ကိုခန့်မောင်က မို့မို့လက်ကို ဆွဲယူတယ် ကျမယောက်ျားက အေမီဆွဲခေါ်သွားတော့ကျမကအလိုလို ဒေးဗစ်နဲ့ တွဲကရတာပေါ့သီးလုံးက ငြိမ့်ငြိမ့်လေးရယ် မီးကလည်း မှေးမှိန်သွားတော့ ကျမတို့ အခန်းထဲရောက်သွားတာပေါ့ အခန်းထဲမတ်တပ်ရပ်လျက်ပဲ ဒေးဗစ်က ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းကို စုပ်တယ် ကျမကလည်း ပြန်ဖက်ပြီးစုပ်လိုက်တယ် အင်ကျီက အပျော့စားဆိုတော့ နို့ကိုအပေါ်ကနေ ဖြစ်ညစ်တော့တယ် နောက်ခုတင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ လက်ကအောက်ကို ဆင်းပြီးကျမ အဖုတ်ကို ပင်တီအပေါ်ကနေပွတ်သတ်ပေးတယ် ကျမလည်း သူ့လက်မောင်းကို ကိုင်ထားတယ် သူကလည်းနောက်တော့ ကျမ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ကျမလည်း ဖငိကြွပေးလိုက်တယ် နောက်တော့ ကျမ စောက်ပတ်ကို နမ်းတယ် နမ်းရင်းနဲ့အဖုတ်ကိုလျှာနဲ့ယက်တယ်ဒေးဗစ်ကလည်း စိတ်ရှည်တယ် ခနနေတော့ ကျမပါးစပ်နား သု့လီးကြီးက တေ့ထားတယ်ကျမလည်း ဟပေးလိုက်တော့လီးထိပ်နားထိငုံပေးသလိုပေါ့ ကျမလည်း ဖီးလ်တက်နေတော့ လီးထိပ်ကို စုပ်ပေးလိုက်တယ်သုလည်း
Oh yes yes good( စာဖတ်သူ နားလည်ခံစားဖို့ ဒေးဗစ်အပြောကို မြန်မာလိုပဲရေးလိုက်ပါ့မယ်)
အိုး ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်တာပဲ
နောက်တော့ ဒေးဗစ်က ကျမပါးစပ်ထဲကနေ သူ့ရဲ့လီးကို ဆွဲထုပ်ပြီး ကျမပေါင်ကြားမှာနေရာယူပြီး ကျမစောက်ပတ်ထဲကို တေ့ပြီးခါးကိုနိမ့်ချလိုက်တော့
ဗြစ် ဗြစ်ဘု ဘု ဘွတ်
သူက ဗမာစကားမတပ်ပေမဲ့ ကျမဟန်မူယာကြည့်ပြီး နာနေတာကို သိတယ် ဒါပေမဲ့ဇွတ်ပဲ အဖုတ်က လည်း အရည်ထွက်ပေမဲ့သူ့လီးက အရမ်းကြီးတယ် ကြီးလို့ ရုန်းပေမဲ့ သူကချုပ်ထားပြီး လိုးတော့ကျမ လည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ရှင် ကျမအဖုတ်ကတော့ အရည်တွေ ထွက်ပေးတယ်ကျမလက်က သူရင်ဘတ်ကိုတွန်းပေမဲ့ သူလီးကြီးကိုတော့ တွန်းထားလို့မရဘူးလေ ဒီတော့ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့သူလိုးတာခံနေရတာပေါ့ အချက်၃၀လောက် ကျမစောက်ပတ်ယားရန်လာပြီး ဒေးဗစ်ကျောကို ကုတ်ကတ်ပြီးကော့ပေးမိတယ် စောက်ပတ်ကလည်း သူ့လီး ကြီးကိုညစ်လိုကိမိတယ်သူလည်း ဆောင့်အားစိတ်လာပြကျမက အရင်ပြီးလိုက်တယ် သူလည်းနောက်ထပ်အချက်၂၀ဆောင့်ပြီး ကျမ စောက်ပတ်ထဲသူ့လရည်တွေ ပန်းချလိုက်ထာ အများကြီးပဲ ရှင် အိပ်ယာတွေတောင်ရွှဲနှစ်သွားတာပဲသူလည်း ကျမ ဘေးမှာလှဲပြီးအနားယူတယ် နာရီက ၉ခွဲနေပီ မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားတော့ ကျမ လက်မောင်းကိုပုတ်နိုးလို့ နိုးလာတယ် ဒေးဗစ်က နောက်တခါလုပ်ချင်ကြောင်းပြောတယ် ကျမလည်းကုန်းပေးရမလား ပြောတော့ သူကလည်းခေါင်းညိမ့်ပြတော့ ကျမလည်း ကုန်းပေးလိုက်တယ် သူကလည်း ကျမနောက်ကနေ ဂါဝန်ကို မတင်ပြီး ပြူးးထွက်နေတဲ့ကျမ စောက်ပတ်ကို ယက်လိုက်တယ်ရှင်
အားးးး ရှီးးးးးး အိုးးး
ဒေးဗစ်က လိုးတော့မယ်စို စောက်ပတ်ယက်တယ် အရည်တွေအရမ်းထွက်မှ လိုးတာ တကိုယ်ကောင်းမဆန်ဘူး အပေးယူမျှတတယ်နောက်တော့လည်းပြီးတော့မယ်ဆို ကျမအရင်ပြီးအောင်လိုးပေးတယ် နောက်ပြီးတော့လည်းကျမ ၂ချည်ပြီးမှ သူက တစ်ချည်ပြီးတယ်။
ခုလည်းစောက်ပတ်ကို ယက်ပြီးတော့ ကျမနောက်ကနေ နေရာယူပြီးသူ့လီးကြီးကျမ စောက်ပတ်ကိုတေ့ပြီး သွင်းချလိုက်တယ်
ဗြစ် ဗြစ် ဘွတ် ဘွတ်
အားးး အားးး ရှီးးးးးးဖြေးဖြေးဒါလင်
ရော့အင့် ရော့ ကောင်းဒယ်
အဖုတ်ကလည်း အရည်ထွက်တော့အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သံ ထွက်သံတွေ ထွက်နေတယ် သူရဲ့လိုးချက်က ထိတယ်￼မီးပွင့်မတပလိုးတာကျမ လည်း အိပ်ယာခင်းကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပြီးလိုက်တယ် သူကတော့ မပြီးသေးဘူးကျမက ဒူးမထောက်နိုင်တော့လို့ မှောက်ချလိုက်ထာကို ကျမ ခါးကိုဆွဲတင်ပြီး သူ့လီးကြီးထိုးထည့်လိုက်တယ်ဗြစ်….ဗြစ်
အားးးရှီးးးးးးအိုးးး အမလေး တော်ပီ
အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဗြိ
အားးးရှီးးးးးးအိုးးးအမလေး မခံနိုင်တော့ဘူး အထဲကလည်းအောင့်တယ် ဒါလင်
သူလည်းကျမ စောက်ပတ်ထဲက လီးကိုချွတ်ပြီး ကျမ ကို ပက်လက်ဖြစ်အောင်လှည့်လိုက်တယ် ကျမ ပေါဂ်ကြားဝင်ထိုင်ပြီး သု့လီးကြီးနဲ့ ထိုးသွင်းလိုက်တယ်
အင့် ရော့ ဘွတ်
အားးး အု အု
သူက ကျမ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူထားတော့ အသံမထွက်တော့ဘူးလေ ကျမလည်း စောက်ပတ်ကအရည်တွေလည်းခနခနပြီးတယ် လူကလည်းမျော့နေပီ သူကလည်းမာန်တင်းပြီးလိုးတယ် သူ့နှုတ်ခမ်းခွာတော့
တော်တော့ ဒါလင် ပင်ပမ်းနေပြီ
သူလည်း စိတ်လျော့ပြီး လိုးချလိုက်တော့
ပြီးလိုက် ဒါလင် ပြီးလိုက်တော့ ကျမစောက်ပတ်ထဲ အရည်တွေပန်းချလိုက်တယ် ကျမလည်းမောပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ် မနက်၎နာရီ ထိုးတော့ရှူးးပေါက်ချင်တာနဲ့ နိုးတော့ ဒေးဗစ်ကလည်း Toilet သွားချင်ကြောင်းပြောတော့ ၂ယောက်သား သန့်စင်ခန်း ဘက်ကိုသွားကြတယ် အဲဒီသူကအမျိုးသားသုံးရှူးးပေါက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် ကျမကတော့ အိမ်သာခွက်ပေါ်အသုံးပြုတယ် ပီးတော့ရေဆေးပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်တော့ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၄နာရီထိုးနေပြီ အတူထမုင်မိတော့ ကျမ လက်ခလေး ကိုင်ပြီးတခြားအခန်းတွေ လျောက်ပြီးချောင်းကြတာပေါ့ ပထမ ဆုံး မောင်နဲ့ အေမီက. အေမီက အပေါ်ကတက်ဆောင့်ပြီး အိပ်ပျော်နေတာလေ ဒါကို ဒေးဗစ်က မြင်တော့ အေမီ ဆွဲခေါ်ပြီးကျမတို့ အခန်းထဲခေါ်လာတယ် အေမီလည်း ရောင်ဝါးဝါးနဲကျမယောက်ျားကတော့ အိပ်ပျော်နေတာပေါ့အေမီပေါငိကြားဝင်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့တေ့ပြီး သွင်းချလိုက်တယ်
ဗြစ် ပြစ် ပြစ် ဖွတ်
အားးး အမလေး နာတယ် နာတယ်
နာတယ် ပပ ရဲ့ သူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီး ဟို၂ယောက်ထက်ပိုကြီးတယ်
လုပ်ပါများလာတော့ အေမီလည်း ဒေးဗစ်ကို ဖက်တွယ်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နေတယ် ဒေးဗစ်ကလည်း ပြန်စုပ်ပြီး အေမီ နို့ ကိုနယ်တယ် နောက်နို့ကို စို့လိုက်တယ် အဲဒီတော့မှ အေမီလည်း ဖီးလ်တက်လာပြီး ကုတ်ကတ်ပြီး ပြီးသွားတယ် ဒေးဗစ်က မပြီးသေးဘူးရှင် ကျမ ကို ဆွဲခေါ်ပြီး ကုန်းခိုင်းတယ် ကျမ လည်းကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ် ဒေးဗစ်က မလိုးသေးတော့ ဘာမျလည်းဆိုပြီးကြည့်လိုက်တယ် မသာမလေး ဒေးဗစ်လီးကို စုပ်ပေးနေတာလေ ဒေးဗစ်က လီးက ပိုပြီးတောင့်တင်းလာမှ ကျမ အဖုတ်ကို အေမီက တေ့ပေးလိုက်တယ်လေ
ဘွတ် ဗြွတ် ရှူးး
အားးးးးအင်းးးပြွတ် အရည်တွေကောလေသံပါရောပြီးထွက်တဲ့အသံပေါ့ တကယ့်ကို လိုးနိုင်တယ်ရှင် အတွင်းသားတွေကို ပွတ်ဆွဲပြီးကိုလိုးတာ အေမီက ကျမရှေ့မှာပေါင်ကားပြီး သူ့စောက်ပတ်ကို ယက်ခိုင်းတယ် ကျမ ဖီးလ်နေတော့ ယက်ပေးလိုက်တယ် နောက်တော့သူလည်းဖီးလ်တက်လာပြီး ကျမ ဘေးဘက်မှာကုန်းထားလိုက်တယ် ဒေးဗစ်ကလည်း ကျမစောက်ပတ်ထဲက လီးကိုချွတ်ပြီး အေမီစောက်ပတ်ကိုလိုးပြန်တယ် ခနကြာတော့ ကျမတို့၂ယောက်စလုံးစိတ်တွေထလာကြတယ် ဒေးဗစ်ကလည်း အလိုးစိတ်လာပြီး အေမီအဖုတ်ထဲက လီးကိုချွတ်လိုက်တယ် အေမီကောကျမကော တောင်နေတဲ့ဒေးဗစ်လီးကို စုပ်ကြတယ် အရည်တွေက ၂ယောက်စလုံးမျက်နာပေါ်ပန်းချလိုက်တယ် ကျမတို့လည်း မျော့နေကြတာပေါ့ ဒေးဗစ်ကို အလယ်ထားပြီး အိပ်ပျော်သွားကြတယ်။
မနက်လင်းဒေးဗစ်က အစောထတာ မသိလိုက်ဘူး အေမီ နဲ့ကျမ. နိုးတော့ ၂ယောက်သားပေကျန်နေတာတွေ ရေချိုးခန်းဘက်ချိုးကြတယ် မနက်စာကို ကော်ဖီနဲ့ မုန့်ဗိုက်ဖြည့်ပြီး လူစုခွဲကြတယ်
အိမ်ရောက်တော့ ခနနားပြီး မောင်နဲ့ကျမ အိပ်ပျော်သွားကြတယ် အိပ်ယာက နိုးတော့ မောင်က
ချစ်လေး ညက တော်တော်ပင်ပမ်းသွားလားလို့မေးတယ်
ဒေးဗစ်တညလုံး ကို လိုးတာပဲမောင်ရယ်
မကွဲပါဘူး မောင်ရယ် ဒါပေမဲ့